विचलन, विशेषज्ञता र मूल्यहरूमा - प्रो. योराम युवलको लेखको प्रतिक्रिया, "उनीहरू विचलित छैनन्", शब्बत पी.पी. अकेफ पूरक - निरन्तर स्तम्भ (स्तम्भ 26) - रब्बी माइकल अव्राहम
विचलन, विशेषज्ञता र मूल्यहरू - प्रो. योराम युवलको लेखको प्रतिक्रिया, "उनीहरू विचलित हुँदैनन्", शब्बत पी.पी. एकेभ - निरन्तरता स्तम्भ (स्तम्भ 26)
8 टिप्पणी	/ १६ एलुल ५७६६ - १९/०९/२०१६ 19 / 09 / 2016
स्तम्भमा अघिल्लो मैले यस वर्ष (XNUMX) को कारणले गर्दा मकोर रिसोन पी को शब्बत पूरकमा प्रो. योराम युवलको लेखमा टिप्पणी गरें। तपाईले मेरो पोस्ट तलको टकब्याकमा विकसित भएको छलफल पनि हेर्नुपर्छ।
प्रो. युवलको प्रतिको मेरो प्रतिक्रिया शब्बत पूरक P. Ra'a मा संक्षिप्त संस्करणमा प्रकाशित भएको थियो (सँगै थप टिप्पणीहरू चाखलाग्दो छ कि तिनीहरू निश्चित रूपमा सबै पढ्न लायक छन् )। यहाँ छापिएका मेरा शब्दहरू छन्:
विचलन, विशेषज्ञता र मूल्यहरु मा
(प्रा. योराम युवलको लेख "उनीहरू विचलित हुँदैनन्", शब्बत पूरक पी. एकेभको प्रतिक्रिया)
प्रो. युवल लुकाको लेखमा मूल्य र तथ्यको गम्भीर मिश्रण छ। यो भिन्नता लेखमा उल्लेख गरिएको उहाँको दिवंगत हजुरबुबाको खुट्टामा रहेको मैनबत्ती थियो भनेर औंल्याउन अर्थ लाग्छ, र यो उसले बेवास्ता गर्नु दुःखको कुरा हो।
उनको टिप्पणी तीन स्तम्भहरूमा खडा छ: 1. एक महान सम्बन्ध र एक पेशेवर को लागी एक मोडेल। 2. यौन विचलनको मनोवैज्ञानिक परिभाषा (पूरा व्यक्तिलाई माया गर्न असक्षमता)। वैज्ञानिक दावीहरू: समलैंगिकता छनौटको परिणाम होइन तर जैविक पृष्ठभूमिको परिणाम हो, यो परिवर्तन गर्न धेरै गाह्रो छ र प्रयास गर्न खतरनाक छ। यहाँ पहिले नै संक्षेपमा भनिएको छ: 3. युवलले प्रस्ताव गरेको मोडेल गलत छ (दिउँसोको लेख हेर्नुहोस्) र यहाँ छलफलको लागि पनि अप्रासंगिक छ। 1. मनोचिकित्सक परिभाषा पनि छलफल संग सम्बन्धित छैन। 2. यी व्यावसायिक प्रश्नहरू छलफलको लागि अप्रासंगिक छन्। अब म विवरण दिनेछु।
एक पटक म Bnei Brak को कोल्लेलमा बसिरहेको थिएँ र एक विद्यार्थीले मलाई नजिक आयो र गिलास तरल वा ठोस छ कि भनेर सोधे। मैले उसलाई भने कि शब्बत गिलासको नियमको सम्बन्धमा ठोस छ, यद्यपि भौतिकशास्त्रीहरूले यसलाई आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकताहरूको लागि तरलको रूपमा परिभाषित गर्छन्। र दृष्टान्त, यदि मनोचिकित्साले यौन विकृतिलाई सम्पूर्ण व्यक्तिलाई माया गर्न असमर्थताको रूपमा परिभाषित गर्दछ - तिनीहरूको लाज। तर, हलचाह वा नैतिकताले व्यावसायिक परिभाषालाई किन मान्ने स्तरमा पनि लागू गर्नुपर्छ ? यसबाहेक, परिभाषाहरू अनुभवजन्य खोज होइनन्, त्यसैले तिनीहरूको सम्बन्धमा व्यावसायिकलाई सामान्य मानिसमाथि कुनै फाइदा छैन। मनोचिकित्सकहरूले व्यावसायिक आवश्यकताहरूको लागि तिनीहरूको अवधारणाहरू परिभाषित गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ, तर यसको सामान्य प्रश्नसँग कुनै सरोकार छैन। मिशेल फुकोले लेखेका थिए कि मनोचिकित्सक निदान मूल्य मान्यताहरु संग संतृप्त छ। मेरो नजरमा उत्तरआधुनिकताका अग्रदूतहरूमध्ये एक भए तापनि उहाँ यसबारे सही हुनुहुन्थ्यो। ठीक छ, दिनमा दुई पटक उभिएको घडीले पनि सही समय संकेत गर्दछ।
मनोचिकित्सकले प्रायः समलैंगिकताको उत्पत्ति निर्धारण गर्न सक्छ। के यसको आनुवंशिक, वातावरणीय वा अन्य पृष्ठभूमि छ। यसले यो निर्धारण गर्न सक्छ कि यो उपचार गर्न सकिन्छ र कुन तरिकामा, र प्रत्येक उपचार को नतिजा के हो। यी सबै व्यावसायिक निर्धारणहरू हुन्, र वैज्ञानिक ज्ञान अवस्थित छ भनेर मान्दै (र यो निश्चित रूपमा यस अवस्थामा पूर्ण छैन, जुन मेरो विचारमा युवलका शब्दहरूमा पर्याप्त जोड दिइएको छैन), विशेषज्ञले तिनीहरूलाई जवाफ दिन सक्छन्। तर यो विचलन हो कि होइन र यसलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न एक सामान्य परिभाषाको कुरा हो र व्यावसायिक दृढताको होइन (माथिका लेखहरू हेर्नुहोस्)।
दुई थप टिप्पणीहरू:
ए। मनोचिकित्सा मा एक सानो विशेषज्ञ को रूप मा, मलाई समलैंगिकता को लागी मनोचिकित्सक को दृष्टिकोण मा परिवर्तन को लागी Yuval द्वारा सुझाव दिइएको व्याख्या मा शंका छ। मेरो विचारमा, यो मुख्यतया मानहरूमा परिवर्तन हो र वैज्ञानिक-तथ्य होइन। आज समाजको एक महत्त्वपूर्ण भागले घटना नैतिक रूपमा नकारात्मक छैन भन्ने विश्वास गर्दछ (सानो एक पनि यसमा सहमत छ) र त्यसैले यसलाई विचलनको रूपमा हेर्दैन। मनोचिकित्सा यहाँ सामाजिक मूल्यहरु द्वारा तल तानिएको छ, र वरपर अर्को तरिका होइन। क्लेप्टोमेनियाको बारेमा सोच्नुहोस्। हामी छलफलको उद्देश्यका लागि मानौं कि यसको आनुवंशिक उत्पत्ति छ र यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन (रूपान्तरित)। के यसको मतलब क्लेप्टोमेनिया विचलन होइन? यो चोरी गर्न निषेधित र हानिकारक छ, त्यसैले यो kleptomaniac एक विकृत रूपमा परिभाषित गर्न उचित छ। यो तथ्यको बावजुद हो कि त्यहाँ पनि चोरी गर्ने प्रवृत्तिको मतलब व्यक्तिले चोरी गर्छ भन्ने होइन (युवलले समलैंगिकताको बारेमा व्याख्या गरेझैं), र त्यहाँ पनि यसको उपचार गर्न सकिँदैन र आनुवंशिक वा जैविक स्रोतहरू छन् (जस्तै मैले यो उद्देश्यको लागि अनुमान गरें। छलफल)। क्लेप्टोमेनिया र समलैंगिकता बीचको भिन्नता यो हो कि आज धेरैजसो मनोचिकित्सकहरू समलिङ्गी हुनुलाई अनुमति र हानिकारक छ भनी विश्वास गर्छन्, जबकि चोरी तिनीहरूको नजरमा निषेधित र हानिकारक छ। यो हामीलाई स्पष्ट छ कि यी मूल्यहरू हुन् र तथ्यहरू होइनन्।
बि. युवल लेख्छन् कि "हरेक शिक्षित धार्मिक मानिस" लाई थाहा छ कि सघन हेरचाह इकाईमा पूर्ण रूपमा मृत व्यक्ति सुत्न सक्छ जसको मुटु धड्किरहेको छ। मलाई लाग्छ कि म एक राम्रो शिक्षित व्यक्ति हुँ (र धेरै धार्मिक पनि), र मलाई वास्तवमा त्यो थाहा छैन। यसबाहेक, यो आफैलाई पनि थाहा छैन। यसको शिक्षासँग कुनै सरोकार छैन (यद्यपि धर्ममा हुनसक्छ), शुतुरमुर्ग किनभने मृत्यु र जीवनको परिभाषा सामान्य हो र क्लिनिकल होइन। डाक्टरले निर्धारण गर्न सक्छ, यदि सबैमा, यस्तो अवस्थामा के प्रकार्यहरू अवस्थित छन्, र योबाट सामान्य जीवनमा फर्कने मौका के हो। तर उसले त्यस्तो व्यक्ति जीवित वा मरेको छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न सक्दैन, र निश्चित रूपमा उसले अंगहरू दान गर्न सक्छ कि छैन (जुन मेरो व्यक्तिगत विचारमा उसलाई जीवित व्यक्ति मानिए पनि उसको लागि अनुमति छ र अनिवार्य पनि छ।) को क्षेत्रमा लेखहरू हेर्नुहोस्। Kt)। यी सबै मूल्यवान प्रश्नहरू हुन् र वास्तविक प्रश्नहरू होइनन्। विभिन्न डाक्टरहरूले यसलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्नु भनेको अर्को सङ्केत हो कि मूल्यमान्यता र तथ्यहरूको मिश्रण सामान्य मानिसहरूमा मात्र होइन।
प्रो. युवलले वेबसाइटमा यसको जवाफ दिनुभयो जसले हामी सबैको लागि सामान्य प्रतिक्रिया थप्यो। मेरो टिप्पणी (र डा. अजगाद गोल्डलाई पनि) को एक विशेष प्रतिक्रिया उठाइएको छ उनको वेबसाइटमा र यो उनको भाषा हो:
रब्बी डा. माइकल अव्राहमको सम्मानमा
टोरा को उच्च संस्थान
तपाईलाई, रब्बी शालोम र ब्रचा,
पहिले, थाहा पाउनुहोस् कि अन्डरहस्ताक्षरले तपाईंलाई र तपाईंको कामको धेरै प्रशंसा गर्छ। म टोराहको संसारमा हदसम्म छैन जसले मलाई तपाईंको टोरा र हलाखिक कामको प्रशंसा गर्न अनुमति दिन्छ, तर न्यूरोबायोलोजी र मैले बुझेको सानो दर्शन मेरो लागि तपाईंको पुस्तक "स्वातंत्र्यको विज्ञान" को धेरै आनन्द लिन पर्याप्त थियो, जुन मलाई लाग्छ। सोचको मौलिक र सुन्दर काम, र क्षेत्रमा ठूलो योगदान।
तपाईंको पुस्तकको मेरो आनन्दको तुलनामा, "तिनीहरू विचलित गर्दैनन्" लेखहरूबाट तपाईंको असन्तुष्ट प्रतिक्रियाबाट यो एकदम स्पष्ट छ। त्यसैले यहाँ मैले आफूमा गरेका केही सुधारहरूप्रति म खुसी छु, मेरो वचनको न्यायोचितताको बारेमा तपाईलाई विश्वास दिलाउन प्रयास गर्नुहोस्, र यदि मनाउनुहुन्न भने, कम्तिमा आफ्नो पहाड र बीचको पुल बनाउन सुरु गर्नुहोस्। मेरो पहाड। म तपाईसँग सहमत हुने कुराहरूबाट सुरु गरौं:
मिशेल फुकोको बारेमा म तपाईसँग दुई पटक (र दिनमा दुई पटक होइन) सहमत छु। दुबै पोस्टमोडर्निज्मको सन्दर्भमा, जुन म पनि खाली पाठ हो भन्ने विश्वास गर्छु, र मनोचिकित्सक निदानमा यसको दृढताको सम्बन्धमा, जसमा, दुर्भाग्यवश, उहाँ एकदम सही हुनुहुन्छ। तर म विश्वास गर्छु, र म पक्का छैन कि यहाँ तपाईं मसँग सहमत हुनुहुन्छ, कि यो अन्यथा असम्भव छ: यो मनोचिकित्सक निदान को लागी बर्बाद छ, यसको प्रकृति द्वारा, कि यो मूल्य मान्यताहरु लाई तोड्न सक्षम हुनेछैन, कम से कम छैन। निकट भविष्यमा। र त्यसोभए दार्शनिकले के गर्न सक्छ - मान र तथ्यहरू बीचको तीव्र विभाजन अलग गर्न, मनोचिकित्सकले खर्च गर्न सक्दैन। र विशेष गरी उसले आफूलाई र जनतालाई भ्रममा पार्न सक्दैन कि त्यहाँ अवस्थित छ - वा हुन सक्छ - आफ्नो क्षेत्रमा यस्तो पूर्ण विभाजन। म त्यसमा पछि फर्कनेछु।
सघन हेरचाहमा सुतिरहेको मानिसको हलाखिक अवस्थाको प्रश्नमा म पनि सहमत छु जब उसको दिमागले काम गर्न छोड्छ र उसको मुटुको धड्कन फेरि चल्छ, जब उसको मुटुको धड्कन हुन्छ, र मैले अध्यायमा लेखेका कुराहरूबाट नयाँ कुरा पनि सिकेको छु। तपाइँको प्रतिक्रिया मा विषय मा शीर्षक। यसबाहेक: मलाई खुशी छ कि तपाईको अन्तिम निष्कर्ष - यो मानिसको अंग दान गर्न अनिवार्य छ - मेरो जस्तै हो। म आशा गर्दछु कि तपाईंले यस मुद्दामा अल्ट्रा-अर्थोडक्स र राष्ट्रिय-धार्मिक यहूदी धर्मका केही नेताहरूको अज्ञानी - र यहाँ सम्म कि काफिर - दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नको लागि Bnei टोरा बीचको आफ्नो स्थिति र प्रभावको फाइदा लिन जारी राख्नुहुनेछ।
तर "जिउँदो" र "मरेको" बीचको भिन्नताको बारेमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो विचारमा, "विकृत" र "विकृत छैन" बीचको भिन्नताको बारेमा गर्न सक्नुहुन्न। म मेरो शब्दहरू व्याख्या गर्नेछु: पहिले, तपाईले लेख्नु भएको विपरीत, डाक्टर र थप कसरी निर्धारण गर्ने कि एक व्यक्ति जीवित वा मरेको छ। मलाई यो पहिलो हात थाहा छ। जब मैले एक विशेषज्ञ डाक्टरको रूपमा इनपेशेन्ट विभागमा काम गरें, मेरो कामको एउटा दुखद पक्ष थियो, पहिलो प्रकाशमा, रातको समयमा मृत्यु भएका बिरामीहरूको मृत्यु निर्धारण गर्नु। घरेलु कामदारको अन्तिम यात्राको शुरुवातमा लैजान आएका घरेलु कामदारको आगमनको तयारीमा मैले चादरले छोपेको धेरै अनुहार आजसम्म सम्झन्छु ।
र अझै पनि म बुझ्छु कि तपाइँ सही हुनुहुन्छ जब तपाइँ भन्नुहुन्छ कि को "जीवित" र को "मरेको" को हलाखिक निर्धारण चिकित्सा निर्धारण भन्दा फरक हुन सक्छ, र यसको बावजुद यो विचलित छैन। तर विचलनको मनोवैज्ञानिक परिभाषा र विचलनको धार्मिक परिभाषा (र निश्चित रूपमा सामाजिक-धार्मिक परिभाषा) पनि असम्बन्धित छन् भन्ने तपाईंको प्रतिक्रियाबाट निस्किएको निष्कर्षले मेरो विचारमा वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दैन।
क्लेप्टोमेनियालाई लिनुहोस्, जुन तपाईंले परीक्षण केसको रूपमा ल्याउनुभयो। Kleptomania एक विचलन होइन। मानसिक विकार हो । विचलन शब्द मनोचिकित्सामा आरक्षित छ, सडक भाषामा जस्तै, असामान्य, घृणित भन्न नमिल्ने, यौन सन्दर्भमा व्यवहारको लागि। मलाई आशा छ कि तपाईंले समलैंगिकतालाई संस्थागत गरिएको अल्ट्रा-अर्थोडक्स यहूदी धर्मको डरलाग्दो मूल्य मनोवृत्तिलाई वैध बनाउनको लागि मानक (उर्फ मानक विचलन) बाट विचलनको गणितीय, र मूल्य-तटस्थ, परिभाषा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छैन।
मनोचिकित्सा "व्यवहार" मात्र होइन व्यक्तिपरक घटनासँग सम्बन्धित छ; तपाईंले लेख्नुभएझैं, र म खुसी छु कि यहाँ तपाईं मसँग सहमत हुनुहुन्छ, क्लेप्टोमानियाकले वास्तवमा क्लेप्टोमानियाक हुनको लागि चोरी गर्नुपर्दैन, र समलिङ्गीले समलिङ्गी हुनको लागि पुरुषसँग झूट बोल्नु पर्दैन। तर यहाँ दृष्टान्त र दृष्टान्त बीचको समानता समाप्त हुन्छ। क्लेप्टोमानियाकले आफ्नो व्यवहारमा अरूलाई हानि पुर्‍याउँछ र हानि पुर्‍याउँछ, त्यसैले उसको व्यवहार गलत छ (विचलित छैन), र समाजलाई यसको विरुद्धमा रक्षा गर्न अनुमति छ। यसबाहेक: यदि उसले बहुमूल्य चीजहरू चोर्छ भने, उसको मानसिक विकार अदालतमा उसँग खडा नहुन सक्छ, र यो केवल सजायको तर्कको चरणमा ध्यान दिइनेछ। मलाई लाग्छ कि तपाईं र म दुवै सहमत हुनुहुन्छ कि समलिङ्गीहरू अपराधी होइनन्, र यदि तिनीहरू पुरुषसँग झूट बोलिरहेका छैनन् भने - यो मलाई स्पष्ट छैन कि तिनीहरू अन्य सबै यहूदी पुरुषहरूबाट कसरी भिन्न छन्, जसले आफ्नो कामुकता व्यक्त गर्न टोराको प्रतिबन्धको सामना गर्छन्।
म मनोचिकित्सा मा तथ्यहरु र तथ्यहरु बाट पूर्ण रूपमा अलग मान असक्षमता को मुद्दा मा फर्कन्छु। क्याथोलिक क्रिस्चियनले मासको समयमा प्राप्त गरेको र खाएको कम्युनियन रोटी उनको मुखमा मसीहको साँचो मासु भएको हो भनी पूर्ण हृदयले विश्वास गर्दछ। यो सबै आशय र उद्देश्यका लागि गलत विचार हो, र यो एक सामाजिक र मूल्यमान्यताको कारणले मनोविज्ञानको परिभाषाबाट विचलित हुन्छ - करोडौं मानिसहरू यसमा विश्वास गर्छन्। यो एक मामूली उदाहरण हो, तर मनोचिकित्सा, जब यो व्यक्तिपरक घटना को परिभाषित, निदान र उपचार को लागी आउँदछ, यी घटनाहरु को लागी जैविक-तथ्यात्मक आधार को बारे मा अन्धकार मा गहिरो छ।
म मेरो पेशालाई भौतिकशास्त्रमा उभिएको पेडेस्टलमा राख्न सक्षम हुन पाउँदा खुसी हुनेछु, तर यो मेरो जीवनकालमा हुनेछैन, नत्र कहिले पनि हुनेछैन। तपाईलाई मबाट राम्ररी थाहा छ, यो मुद्दा अन्तर्निहित एक आधारभूत दार्शनिक प्रश्न, जसको हाल कुनै सन्तोषजनक उत्तर छैन भन्ने मलाई लाग्छ, मनोवैज्ञानिक कारणको प्रश्न हो: यो एकतर्फी वा दुई-तर्फी हो वा यो मुद्दामा लागू हुँदैन? सबै? मेरो हजुरबुवा जसलाई तपाईंले उल्लेख गर्नुभयो, तपाईं जस्तै, मनोशारीरिक कारणको प्रश्नको साथ व्यवहार गर्नुभयो, र त्यहाँ छैन र यसको समाधान हुन सक्दैन भनेर पनि विश्वास गर्नुभयो (इग्नोरबिमस - हामीलाई थाहा छैन र हामी कहिले पनि थाहा पाउने छैनौं)। कुनै बहाना नगरी र यहाँ यसको गहिराइमा पुग्ने प्रयास नगरी, म वास्तवमा उहाँका विद्यार्थी, प्रो. योसेफ न्यूम्यानको विचारलाई समर्थन गर्दछु, जसले सोचेका थिए कि आज यसको कुनै समाधान छैन, तर भोलि यो सम्भव छ (इग्नोरमस - हामीलाई थाहा छैन, तर हामीले कुनै दिन थाहा पाउन सक्छौं।)
अन्तमा, म दर्शनको उचाइबाट धार्मिक समलिङ्गीहरूको अँध्यारो संसारमा फर्कन चाहन्छु। मैले मेरो लेख तपाईंको सहकर्मी रब्बी लेभिनस्टाइनका शब्दहरू पछ्याएर लेखेको छु, जसले यी असल मानिसहरूलाई बहिष्कृत गर्यो र तिनीहरूलाई दुःखी बनायो। दिनको अन्त्यमा व्यावहारिक प्रश्न जुन मलाई चासोको छ, र जुन मैले तपाइँको प्रतिक्रियामा प्रत्यक्ष र सान्दर्भिक सन्दर्भ फेला पारेको छैन (र म यस्तो सन्दर्भको लागि आशा गर्दछु), के त्यहाँ धार्मिक समलिङ्गीहरूलाई बाँच्न दिने तरिका छ कि छैन। धार्मिक सियोनिस्ट समुदायहरूमा परिवारहरू सुरु गर्नुहोस्। एकपटक यो पुरुषसँग झूट नबोल्ने मानिसहरूको कुरा आउँछ, यो मेरो विनम्र विचारमा हलाखिक भन्दा बढी सामाजिक प्रश्न हो। यहाँ, मेरो विचारमा, तपाईं, म, र हाम्रा सबै पाठकहरूले तपाईंको सहकर्मी, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको भनाइलाई सम्झनुपर्छ: "पूर्वाग्रह तोड्न भन्दा अपारदर्शीलाई तोड्न सजिलो छ।"
र उहाँका शब्दहरूमा मेरो प्रतिक्रिया यहाँ छ:
प्रिय प्रा युवल, नमस्कार।
मेरो नम्बरहरूको मजा लिनु भएकोमा र यहाँ तपाईंको प्रशंसा पनि व्यक्त गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम मेरो सम्मानमा। यो पक्कै पनि मेरो लागि सजिलो छैन।
वास्तवमा, तपाईले लेखमा भनेको कुरामा म सहमत भएन, यद्यपि म यो भन्न सक्दिन कि मलाई रमाइलो लागेन। सामान्य रूपमा, चीजहरू राम्रोसँग लेखिएका छन् र स्पष्ट र सुन्दर तरिकामा। र अझै, भनिएको छ, "सुधारको अन्त्य" पछि पनि (तपाईंले यसलाई राख्नुभयो), म तिनीहरूसँग सहमत छैन, र म यहाँ किन व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछु।
यदि हामी Foucault मा सहमत छौं (मेरो मतलब दोस्रो बिन्दु), तब हामी पहिलो साझा निष्कर्षमा पुगेका छौं कि मनोचिकित्सा मूल्य मान्यताहरु संग संतृप्त छ र धेरै हदसम्म ती मा आधारित छ। यसमा पक्कै पनि तथ्यात्मक आयाम छ, तर तल्लो रेखामा सधैं मूल्य र सांस्कृतिक प्रश्नहरू समावेश हुन्छन्।
तपाईंले यो कुरा हो भनी सहमति जनाउनुभएको तथ्यले गर्दा, तपाईंले रब्बी र मनोचिकित्सकबीचको सम्बन्ध पेशेवर र रब्बीबीचको सम्बन्धको मोडेलको अधीनमा रहेको दाबी कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने मैले देख्दिनँ। मनोचिकित्साले यसलाई विचलनको रूपमा नदेखे तापनि, तपाईं अझै पनि सहमत हुनुहुन्छ कि यो एक मूल्य प्रस्ताव हो। त्यसोभए रब्बीले यसलाई व्यावसायिक संकल्पको रूपमा किन स्वीकार गर्ने? उसले पक्कै पनि निर्णय गर्न सक्छ कि उसले यो पाउँछ, तर यो उनको हलाखिक निर्णय हो र यसको व्यावसायिक शक्तिहरु संग कुनै सम्बन्ध छैन। एक रब्बी बनाम एक पेशेवर को मोडेल को लागी, तपाईले पहिले नै मेरो पहिलो प्रतिक्रिया मा मलाई उल्लेख गर्नुभयो लेखमा मैले यस विषयमा समर्पित गरें दिउँसो म.
तपाईंले त्यसपछि यो अपरिहार्य छ भनेर पनि थप्नुभयो (त्यो मनोचिकित्साले तथ्यहरूसँग मूल्यहरू मिलाउनेछ)। यद्यपि म एक पेशेवर होइन, म अझै पनि यो कुरामा सहमत छैन भन्न चाहन्छु। यदि म गलत छु भने मलाई सच्याउनुहोस्, तर मनोचिकित्साले तथ्यहरूमा केन्द्रित हुन सक्छ (बृहत्तर अर्थमा, अर्थात् प्राकृतिक विज्ञानमा जस्तै तिनीहरूलाई व्याख्या गर्ने सिद्धान्तहरू सहित), र अरू केही छैन। उदाहरणका लागि, उनी नियमित रूपमा समलैंगिकताको उत्पत्ति के हो भन्ने कुरामा सन्तुष्ट हुन सक्थे (मेरो लागि यसमा तपाईले चाहानुभए जंगली मनोविश्लेषणात्मक अनुमानहरू पनि समावेश गर्दछ, जबसम्म यी सिद्धान्तहरू हुन् जसले घटनालाई कुनै मूल्य शुल्क बिना नै व्याख्या गर्न खोज्छन्), कसरी। विकास (ibid.), जहाँ यो प्रचलित छ, यो कसरी र कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, र परिवर्तनको कुनै पनि रूपको मूल्य के हो (वा "रूपान्तरण" हामीमा छैन) जस्ता र यस्तै। यी प्रश्नहरू हुन् जसले तथ्यहरू र तिनीहरूको व्याख्यासँग सम्झौता गर्दछ, र त्यसैले वैध वैज्ञानिक र व्यावसायिक प्रश्नहरू हुन्। मलाई लाग्छ कि यी सबै प्रश्नहरू कुनै मूल्य शुल्कको साथ चार्ज गरिएको छैन। अर्कोतर्फ, यो विचलन हो कि होइन भन्ने प्रश्न समाज र भित्रका प्रत्येक व्यक्तिले निर्धारण गर्न छोड्नुपर्छ ।
निस्सन्देह, यदि तपाईंले "विचलन" को अवधारणालाई मेरो तथ्याङ्कीय मानक ("तटस्थ गणितीय परिभाषा", तपाईंको भाषामा) बाट विचलनको रूपमा पनि बनाउनुहुन्छ भने, मनोचिकित्साले यसलाई व्यावसायिक रूपमा निर्धारण गर्न सक्छ, तर तपाईंले यहाँ आफ्नो टिप्पणीमा पहिले नै सहमत हुनुहुन्छ। यो मामला होइन। अर्कोतर्फ, तपाईं यहाँ फर्केर आउनुभयो र विचलन शब्दमा मेरो उपयोगितालाई सच्याउनुहुन्छ, र मलाई लाग्छ कि त्यसो गर्दा तपाईंले फेरि दैनिक प्रयोगको लागि मनोचिकित्सक परिभाषा दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो जिल्लाहरूमा सामान्य प्रयोगमा विचलन एक बलियो (जन्मजात?) आपराधिक कार्यको प्रवृत्ति हो (जस्तै "विचलन" शब्द बाहेक हामीले सहमति जनाएका क्लेप्टोमेनियाको उदाहरण)। एक तरिका वा अर्को, यो एक परिभाषा हो, जसको कारण रब्बी लेभिनस्टाइन र मेरो सानो आत्म (जो धेरै चीजहरूमा आफ्नो विचारबाट धेरै टाढा छ) सहमत छन् कि यसमा व्यावसायिक अधिकार लिने कुनै ठाउँ छैन। अवधारणाको ठोस सामग्री के हो, र यसमा समलैंगिकता समावेश छ, म व्यक्तिगत रूपमा सोच्दैन (किनभने मेरो विचारमा विचलन अनैतिक गतिविधिको प्रवृत्ति हो, र धार्मिक अर्थमा आपराधिक गतिविधिको प्रवृत्ति होइन)। मलाई लाग्छ कि रब्बी लेभिन्सटाइनको दृष्टिकोण हो हो (किनभने उनको विचारमा धार्मिक अर्थमा आपराधिक गतिविधिको प्रवृत्ति पनि एक विचलन हो, हुनसक्छ किनभने उसले नैतिकताको साथ हलाखालाई पहिचान गर्दछ, जसलाई म दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछु र यसैले ढिलो झन्झटमा सामेल हुन्छु)।
तल्लो रेखा, म अमेरिकी मनोचिकित्सा संघ वा कुनै अन्य व्यावसायिक संघको लागि हामी सबैको लागि के उपचार गर्नुपर्छ र के हुँदैन, र विचलन के हो र के हुँदैन भनेर निर्धारण गर्ने कुनै कारण देख्दिन। यो समाजमा छोडिनुपर्छ, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो लागि, र पक्कै पनि उसको व्यक्तिगत मनोचिकित्सकलाई (तिनीहरूको व्यावसायिक सम्बन्धको विपरीत)। यसको मतलब यो हो: समाजले निर्णय गर्नेछ कि त्यहाँ केहि चीज छ जुन अरूलाई हानिकारक छ (क्लेप्टोमेनिया, पेडोफिलिया, आदि), र त्यसपछि रोगीले यसको लागि इच्छा व्यक्त नगरेको भए पनि उपचार गर्नुपर्छ (चरम अवस्थामा पर्याप्त)। कुनै सामाजिक हानि नभएको अवस्थामा, व्यक्ति आफैले निर्णय गर्नेछ कि उसलाई उपचार चाहिन्छ / चाहिन्छ वा छैन। र पक्कै पनि उसले मनोचिकित्सकलाई फर्काउँछ (र एसोसिएसन होइन) भन्न सक्छ कि ऊ आफ्नो मूल्यको कारणले गर्दा यो मामिलाको उपचार गर्न इच्छुक छैन। जे भए पनि, म त्यस्ता मुद्दाहरूमा व्यावसायिक संघको सामूहिक निर्णयको लागि कुनै ठाउँ देख्दिन।
मलाई लाग्छ कि यो तस्विरले पनि स्पष्ट पार्छ कि किन मेरो विचारमा त्यहाँ निश्चित छ र मनोचिकित्सामा मूल्य आयामहरू परिचय गर्नबाट बचेको छ। यस मोडेलमा मेरो बुझाइको राम्रोसँग हामी यसलाई बेवास्ता गर्छौं, त्यसैले मेरो विचारमा मनोचिकित्सकले निश्चित रूपमा भौतिकशास्त्री वा दार्शनिकले जस्तै मूल्य र तथ्यहरू बीचको भिन्नता बनाउन सक्छ। म विज्ञ नभएकोले, यी शब्दहरूमा गल्ती हुन सक्छ भन्नेमा मलाई कुनै शंका छैन, र तपाईंले मलाई सच्याउनुभएमा म खुसी हुनेछु।
मुटुको धड्कन र दिमागले काम गर्न छाडेको अवस्थामा सघन उपचार कक्षमा सुत्ने व्यक्तिको अवस्था पनि यस्तै हुन्छ। मेरो विचारमा विपक्षीहरू, जो मेरो नजरमा गलत र हानिकारक छन्, तपाईंले भन्नुभए जस्तै "अज्ञानी" होइनन्। आखिर, यी कुनै पनि प्रकारको तथ्य वा ज्ञान होइनन्, र त्यसैले म तिनीहरूको सन्दर्भमा यो शब्दको प्रयोगको विरोध गर्दछु। मेरो विचारमा तिनीहरू नैतिक रूपमा गलत छन् र त्यसैले तिनीहरू हानिकारक छन्। फेरि, मेरो लागि मूल्य र तथ्यहरू बीचको भिन्नताको बारेमा होसियार हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। ठीक यस कारणले गर्दा चिकित्सकसँग यस प्रश्नको सम्बन्धमा कुनै थप मूल्य छैन।
तपाईंले यहाँ आफ्नो टिप्पणीमा व्यवहारमा यो भनाइ डाक्टरहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको हो भन्ने तथ्यलाई अख्तियारको प्रतिनिधिमण्डल मात्र होइन, अरू केही होइन। यो व्यावसायिक निर्णय होइन। मूल्य र तथ्यलाई फेरि मिसाउनु हुँदैन। वास्तवमा मृत्यु निर्धारण गर्ने निर्णय डाक्टरहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुहोस् (जस्तै तपाईंले डाक्टरको रूपमा आफ्नो टोपीमा आफ्नो बारेमा वर्णन गर्नुभयो), तर यसको मतलब यो तथ्यपरक-व्यावसायिक निर्णय होइन। यो सुविधा र दक्षताको लागि मात्र गरिन्छ, र वास्तवमा यसले प्रक्रियालाई छोटो र सुव्यवस्थित गर्नको लागि मात्र विधायिकाको शक्तिहरू प्रत्यायोजन गरिरहेको छ। मृत्यु निर्धारण गर्नुहोस्, यद्यपि यो मूल्य निर्धारण हो)। त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिले के कार्य गर्दछ र उसको जीवनमा फर्कने सम्भावनाहरू के छन् भन्ने निर्णय गर्नु व्यावसायिक निर्णय हो। यस्तो अवस्थामा उहाँलाई मृत मान्ने निर्णय - एक शुद्ध मूल्य निर्णय हो। तथ्यहरूसँग उनको कुनै सरोकार छैन। तपाईले लेख्नु भएको विपरित, जीवन र मृत्यु सम्बन्धी हलाखिक निर्णय "चिकित्सा निर्णय भन्दा फरक छैन।" जीवन वा मृत्युको बारेमा "चिकित्सा निर्णय" जस्तो कुनै चीज छैन भनेर अस्ट्रिच। यो एक शुद्ध मूल्य निर्णय हो (माथि वर्णन गरिए अनुसार)। यो साँच्चै सत्य हो कि कानूनी निर्णय हलाखिक भन्दा फरक हुन सक्छ, किनकि यी दुई फरक मानक (तथ्यपरक भन्दा) कोटिहरू हुन्।
हामी पूर्ण रूपमा सहमत छौं कि समलिङ्गीहरू अपराधी छैनन्। तर हामी निश्चित रूपमा सहमत छैनौं कि समलिङ्गीहरू (व्यावहारिक रूपमा आफ्नो प्रवृत्ति प्रयोग गर्ने) अपराधी होइनन्। हामी सहमत छौं कि तिनीहरूका कार्यहरू अपराध होइन, अर्थात्, नैतिक अपराध (मैले उल्लेख गरें कि त्यहाँ धार्मिक शिविरमा ती व्यक्तिहरू छन् जसले अन्यथा सोच्छन्, म तिनीहरूमध्ये होइन), किनकि तिनीहरूले अरूलाई हानि गर्दैनन्। तर हलाखिक र टोरा अपराधी हुन्, त्यसैले धार्मिक र हलाखिक दृष्टिकोणबाट तिनीहरू हत्यारा वा लुटेराको समान अर्थमा अपराधी हुन् (तर तिनीहरू नैतिक रूपमा पनि अपराधी हुन्)। अपराधको डिग्री पक्कै पनि अर्को कुरा हो। यो जहाँ छनोट र नियन्त्रणको डिग्री तिनीहरूमा आउँदछ र यो निषेध हो भन्ने जागरूकताको डिग्री आउँछ (एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिले यसलाई अवश्य पनि अवैध कार्य मान्न सक्दैन)। सामान्य चोरको अगाडि एक क्लेप्टोम्यानियाक जस्तै।
यो नोट गर्नु मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ कि समलिङ्गीहरूको उपचारको सन्दर्भमा म तपाईंले मलाई अपेक्षा गरेको भन्दा बढी उदार छु। मेरो लागि, यो कुरालाई व्यावहारिक रूपमा बुझेकाहरूले पनि समुदायमा सामान्य मानवीय व्यवहारको हकदार छन् (जबसम्म उसले यसलाई हल्लाउँदैन र यसलाई प्रचार गर्दैन, जुन कानून अनुसार अपराधको लागि उपदेश हो)। एक व्यक्ति जो आफ्नो व्यक्तिगत र निजी क्षेत्र मा एक अपराधी हो समुदाय को एक वैध सदस्य हो, विशेष गरी यदि त्यो एक परिस्थिति संग सामना गर्न गाह्रो छ भने। मैले विगतमा यस बारे विस्तृत रूपमा लेखेको छु, र उदाहरणका लागि हेर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् यहाँ र पनि यहाँ। अखबारमा मेरो प्रतिक्रियामा कुराहरू किन नआए भनेर तपाईलाई अचम्म लाग्यो, यो किनभने मैले त्यहाँ तपाईको लेखमा उठाएका तर्कहरूमा मात्र टिप्पणी गरें, विषयको सारमा होइन। यदि तपाईंले स्तम्भमा मेरो लामो प्रतिक्रियाको सुरुवात देख्नुभयो भने अघिल्लो मेरो साइट, तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ कि मैले स्पष्ट रूपमा लेखेको छु कि म तपाईंको धेरै व्यावहारिक निष्कर्षहरूसँग सहमत छु। दुर्भाग्यवश प्रणालीले मलाई पत्रिकामा प्रतिक्रिया विस्तार गर्न अनुमति दिएन। यसैले मैले यहाँ साइटमा र त्यसपछिको छलफलमा (टकब्याकहरूमा) पछिल्ला दुई स्तम्भहरूमा "केही सुधारहरू" गरेको छु।
र म तपाइँले "मेरो सहकर्मी" को रूपमा उद्धृत गरेको मिमाराको साथ समाप्त गर्नेछु, जसरी तपाइँले राख्नुभयो (यस्तो वैज्ञानिक विशालसँग एकै पटक मेरो नाम उल्लेख गर्न मलाई लाज लाग्छ)। यो साँच्चै एक पूर्वाग्रह परिवर्तन वा क्र्याक गर्न गाह्रो छ। तर ठूलो प्रश्न यो हो कि Didan मामिलामा यो वास्तवमै पूर्वाग्रह हो, वा यो फरक मूल्य स्थिति हो (तपाईंको र पक्कै पनि मेरो सहित प्रत्येक मूल्य स्थिति, एक अर्थमा पूर्वाग्रह हो)। समलैंगिकताप्रति धार्मिक समाजमा निषेध र सामाजिक मनोवृत्ति (जसको मेरो विचारमा निषेधसँग कुनै सरोकार छैन, किनकि शब्बातमा शिल्पहरूमा प्रतिबन्धहरू कम गम्भीर छैनन् र त्यस्तो व्यवहार प्राप्त गर्दैनन्) वास्तवमा मेरो विचारमा पूर्वाग्रह हो (किनकि तथ्यात्मक मान्यताहरू बनाइन्छ, मान मात्र होइन)। तर समलैंगिकतालाई निषेधको रूपमा हेर्नु पूर्वाग्रह होइन तर हलाखिक मानक हो (मेरो विचारमा दुर्भाग्यपूर्ण भए पनि)। त्यस्ता मानकहरू (कुनै पनि मानदण्डको रूपमा) को मनोवृत्ति अवश्य पनि हामी प्रत्येकको विश्वासमा निर्भर गर्दछ। म व्यक्तिगत रूपमा टोराहको दातामा विश्वास गर्छु, कि यदि उसले निषेध गर्यो भने यसको बारेमा केहि समस्या छ (जुन मेरो गरिबीमा मैले ध्यान दिएन)। उहाँको आज्ञामा मन झुकाउँछु । तर यी विश्वासका प्रश्नहरू हुनाले, म मनोचिकित्साले स्थान लिन चाहन्न, र निश्चित रूपमा दृढ व्यक्तिहरू होइन, तिनीहरूको बारेमा (जस्तै हाम्रो क्याथोलिक चचेरे भाईहरूको मुखमा कुराकानी गर्दा के हुन्छ), र यहाँ हामी सम्भावनामा फर्केका छौं। र arrays बाट मनोचिकित्सा विच्छेद गर्न आवश्यक छ। र यसको बारेमा हाम्रा मालिकहरूले पहिले नै भन्नुभएको छ (ibid।, Ibid।): सिजरलाई दिनुहोस् सिजरलाई ...
 मैले भन्नै पर्छ कि योभ सोरेकका दुई लेखहरू, दुई हप्ता अघि एउटै पूरकमा प्रकाशित एउटा र शब्बत पूरक वेबसाइटमा प्रकाशित एउटा (p. हेर्नुहोस्), यो सबैभन्दा बौद्धिक र सान्दर्भिक छलफल हो। म प्रेस मा वा सबै यस विषयमा। यसमा भाग लिन पाउनु मेरो सम्मानमा।
विचलन, विशेषज्ञता र मूल्यहरू - प्रो. योराम युवलको लेखको प्रतिक्रिया, "उनीहरू विचलित हुँदैनन्", शब्बत पी.पी. एकेभ पूरक (स्तम्भ 25)
टोराहको 'हेफ्जा' - रब्बी येहुदा राकको लेखको प्रतिक्रिया
Halacha र वास्तविकता - halakhic विशेषज्ञता के हो
8 विचारहरू "विचलन, विशेषज्ञता र मूल्यहरूमा - प्रो. योराम युवलको लेखको प्रतिक्रिया," तिनीहरू विचलन गर्दैनन्", शब्बत पी.पी. अकेफ - निरन्तरता स्तम्भ (स्तम्भ 26)"
30 तिश्री 10 - 2016/12/31 XNUMX:XNUMX बजे
सबैभन्दा पहिले, म यो कुरा औंल्याउन चाहन्छु कि मैले पत्राचार र प्रवचन, यसको गहिराई र सिद्धान्तमा तपाईं दुवै सहमत हुनुहुन्छ भन्ने निष्कर्षबाट पनि मैले साँच्चै आनन्द उठाएँ र सिकें।
यद्यपि, अझै पनि मैले बुझेको छैन कि तपाईंले विचलनलाई अपराधको प्रवृत्तिको रूपमा परिभाषित गर्न र आदर्शबाट विचलन मात्र होइन भनेर किन जोड दिनुहुन्छ? हस्तक्षेप वा उपचार चाहिने मानकबाट विचलनको डिग्री साँच्चै मूल्यवान छ, तर सामान्यबाट धेरै विचलन वैध छ।
म फुकोलाई प्रवचनमा फिर्ता ल्याएकोमा माफी चाहन्छु, तर द म्याडनेस अफ द एज अफ रिजनमा फुकोले ठ्याक्कै त्यसैलाई सम्बोधन गरे र म बुझ्छु कि हामी एउटै निष्कर्षमा पुग्नेछौं र तथ्यहरू बीचको भिन्नता (सामान्य वक्रबाट धेरै विचलन)। र मानहरू (हामी सबै विचलित वा सूचीकरण मूल्यवान छ)
यस तरिकामा विचलन परिभाषित गर्न कुनै बाधा छैन। परिभाषाहरू तपाइँको लागि एक कुरा हो। तर मलाई लाग्छ कि यो स्वीकृत परिभाषा होइन र पक्कै पनि रब्बी लेभिन्स्टाइनले चाहेको होइन र जसलाई हामी यहाँ छलफल गर्दैछौं। त्यसकारण, हामी (योराम युवल र म) यसलाई गणितीय र तटस्थ रूपमा परिभाषित नगर्न सहमत भयौं। दैनिक प्रयोगमा "विचलन" स्पष्ट नकारात्मक अर्थ भएको वाक्यांश हो। तपाईको सुझाव अनुसार, रब्बी लेभिन्सटाइनले केहि तुच्छ र व्यर्थको कुरा भने, त्यसोभए यसको बारेमा किन छलफल?! तथ्यात्मक समलिङ्गीताले जनसंख्यामा अल्पसंख्यकलाई चित्रण गर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन। बहस (रब्बी लेभिन्सटाइनसँग) यसको उचित उपचारको बारेमा हो (यहाँ पनि युवल र म सहमत छु, छलफलको लागि व्यावसायिक प्राधिकरणको शब्दावली र सान्दर्भिकता बाहेक)। एक वा अर्को तरिका, यहाँ सबै बहस मूल्य प्लेनमा छन् र तथ्यात्मक-गणितीय होइन।
मैले फुकोमा तपाईंको टिप्पणी बुझिन। आखिर, हामी आफैले फुकोलाई प्रवचनमा फर्काइसकेका छौं (यसप्रति नकारात्मक सामान्य मनोवृत्तिमा सहमत भएपछि), किनकि यहाँ उहाँ साँच्चै सही हुनुहुन्छ (उडाइरहेको घडी, आदि)। मनोचिकित्सा निदान मूल्य र सांस्कृतिक धारणामा आधारित हुन्छ भन्ने फुकोल्टको भनाइ (तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको पुस्तकमा) सँग हामी दुवै सहमत थियौं। तर मलाई लाग्छ ठ्याक्कै यही कारणले गर्दा मनोचिकित्सकले यहाँ तर्कमा आफ्नो व्यावसायिक टोपी लगाउन सक्दैन (किनकि यी मूल्यहरू हुन् र तथ्यहरू होइन)।
यो (र यो मात्र) अहिले हामी बीचको बहस हो। एक पूर्ण समान बहस मृत्युको क्षण निर्धारण गर्न को लागी एक चिकित्सक को व्यावसायिक अधिकार को प्रासंगिकता को बारे मा छ। तर यो आफैमा एउटै तर्क हो।
सबै व्यभिचार निषेधहरूको साथ नैतिक समस्या, यो हो कि व्यक्तिले आफैले मात्र पाप गर्दैन तर अपराधमा आफ्नो पार्टनरलाई मद्दत र बलियो बनाउँछ।
जब निषेधित सम्बन्ध संस्थागत हुन्छ र धेरैलाई लाज बिना देख्न सकिन्छ - तब नकारात्मक उदाहरणको आयाम धेरैमा थपिएको छ र यो स्वीकार्य छ भन्ने सार्वजनिक कथन, एक कथन जसले अझै पनि केटाहरूमा विनाशकारी प्रभाव पार्छ। शंका, र एक नकारात्मक उदाहरण निषेध अपमान गर्न सक्छ।
सम्पूर्ण इजरायल एक अर्कामा गाँसिएको छ, र व्यक्तिको कार्यले सम्पूर्ण शासनको लागि प्रभाव पार्छ। हामी सबैलाई उहाँलाई सुधार चाहिने कुरामा एक-एक गरेर पवित्र र सुधार गर्ने विशेषाधिकार प्राप्त होस्, र यसरी सम्पूर्ण संसारलाई सहीमा शासन गर्न।
सादर, S.C. लेभिङ्गर
यसो गरेर तपाईंले कुनै पनि प्रकारको निषेधलाई नैतिक अपराधमा परिणत गर्नुभयो। आखिर, जहाजमा प्वालको दृष्टान्त अनुसार, अर्को व्यक्तिलाई समावेश नगर्ने अपराधहरू पनि वास्तवमा उसको भाग्यलाई असर गर्छ। त्यसैले यस अनुसार सबै टोरा नैतिकता हो।
यदि तपाइँ आफैले निषेध नैतिक हो भनेर व्याख्या गर्नुहुन्न भने, यसको असफलता र हानिको आयामको कारणले नैतिक भएको कुरा गर्नुको अर्थ छैन। यो जनजाति टोटोलोजी हो।
30 तिश्री 10 - 2016/12/34 XNUMX:XNUMX बजे
SD XNUMX Elul XNUMX मा
रब्बी अव्राहम नेरुलाई - नमस्कार,
वास्तवमा, परमेश्वरको इच्छाको सबै उल्लंघनहरू अनैतिक छन्, हामी सृष्टिकर्ताको सम्मानमा ऋणी छौं, दुबै संसारमा 'घरको मालिक' भएकोले, र हामीसँग उहाँको सबै अनुग्रहको लागि कृतज्ञताबाट।
एकै समयमा, धेरै व्यभिचार निषेधहरू, जसले हामीलाई स्वस्थ पारिवारिक जीवनको निर्माण गर्न उचाल्छ, केवल वृत्तिले मात्र होइन, तर प्रेम, वफादारी र दयाको मूल्यहरूद्वारा प्रभुत्व जमाउँछ, जसको आधारमा बुबा र आमाले एकअर्कालाई फाइदा पुर्‍याउँछन् र अनन्त रोप्छन्। प्रेम र भक्ति।
तर सृष्टिकर्ताको सम्मान बाहेक, आमाबाबुप्रति आदरको प्राथमिक कर्तव्य पनि छ। आफ्नो सन्तानले यस्तो जीवनमा पर्दा आमाबाबुलाई कत्तिको निराशा हुन्छ जसको सम्पूर्ण अस्तित्व नै गम्भीर निषेधित जीवन हो, जुन जीवनमा यहूदी धर्मको मार्गलाई निरन्तरता दिने 'धन्य पुस्ता धन्य' स्थापना गर्ने कुनै सम्भावना छैन?
उहाँलाई हुर्काउन र शिक्षित गर्नका लागि उसको आमाबाबुले उहाँमा कति लगानी गर्नुभयो र उहाँलाई संसारमा ल्याउनको लागि कति आफ्नो जीवन दिनुभयो भन्ने कुरा जान्‍ने व्यक्तिले आफू जहाँ पर्यो त्यहाँबाट बाहिर निस्कने हरसम्भव प्रयास गर्न बाध्य हुन्छ।
जसरी आमाबाबुले बच्चालाई अँगालो हाल्ने सुअवसर प्राप्त गर्न शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा कठिन उपचारबाट गुज्रन्छन्, र यदि तिनीहरू यो उपचारमा सफल भएनन् भने, अर्को उपचार प्रयास गर्नुहोस्, र हार नमान्नुहोस् - अब यो बच्चाको हातमा छ। जससँग त्यति नै रकम लगानी गर्नका लागि उनको आमाबुवालाई फाइदा थियो। यो न्यूनतम हो कि उसले तिनीहरु लाई तिनीहरु लाई तिनीहरु को लागी तिर्न सक्छ।
कोही पनि परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने निश्चित नभएका चिकित्सकहरू पनि सफलताहरू छन् भनी बताउँछन्। समलिङ्गी प्रवृत्ति बलियो र फरक हुँदा पनि, जुन परिवर्तन गर्न धेरै गाह्रो छ - डा. Zvi Mozes ('Rot' वेबसाइट मा उनको लेख, 'रिभर्सल प्रवृत्तिको उपचार मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावकारी छ') भन्छन् कि मानिसहरू धेरै धेरै छन्। दृढ विश्वास र दृढ विश्वास छ, एक परिवार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, उचित व्यावसायिक हेरचाहको सहयोगमा।
दत्तक ग्रहण र सरोगेसी, प्रतिबन्धको समस्या समाधान नगर्नुको अलावा, बच्चालाई लिएको आमाबाबुको लागि शोक समावेश गर्दछ। समलिङ्गी दम्पतीहरूको लागि धर्मपुत्रको माग बढ्दै जाँदा बच्चालाई आमाबाबुको हातमा छोड्ने प्रयास गर्नुको सट्टा धर्मपुत्रको अत्यधिक प्रयोग गरेर 'आपूर्ति' बढाउन कल्याणकारी सेवाहरूको प्रवृत्ति निम्त्याउनेछ।
'सरोगेसी' भनेको परिवारको भयानक पीडाको शोषण हो। गर्भावस्था र सुत्केरीको पीडा कुनै पनि इमान्दार महिलाले भोग्नु पर्दैन, जसले गर्दा बच्चा अपरिचितहरूलाई दिइनेछ, बरु उनी भयानक आर्थिक वा मानसिक पीडामा छिन्, र अपराधी संगठनहरू र भ्रष्ट शासनहरू संलग्न छैनन् भने कसलाई थाहा छ?
मैले लेखेको रूपमा, यी सबै सत्य हुन सक्छ र अझै पनि यो छलफलको लागि एक अप्रासंगिक तर्क हो। प्रश्न यो हो कि प्रतिबन्धहरूको प्रकृति के हो, र त्यहाँ सहायक नैतिक पक्षहरू छन् कि छैनन्।
त्यसबाहेक चीजहरूको शरीरमा केही नोटहरू छन्:
1. सृष्टिकर्ता एक हुनुहुन्छ जसले मानिसलाई आफ्नो झुकावले सृष्टि गर्नुभयो। म त्यो परिवर्तन गर्न मानिसमा नैतिक दायित्व देख्छु भन्ने पक्का छैन।
2. आमाबाबुको निराशा अवस्थित हुन सक्छ, तर त्यहाँ त्यस्तो अवस्था हुन सक्छ जहाँ यो अवस्थित छैन। त्यसपछि के हुन्छ? आजला उनको नैतिक कर्तव्य? त्यो भन्दा माथि, मैले जाँच गरेको छैन तर मलाई लाग्छ कि त्यहाँ यस्ता दम्पतीहरू छन् जसले बच्चाहरू हुर्काउँदै छन् जसले चिहानको रक्षा गरिरहेका छन्। मलाई लाग्छ "कुनै मौका छैन" धेरै बलियो वाक्यांश हो।
3. मानिस "लड्यो" होइन तर "समाप्त भयो।"
4. यी सबै तर्कहरूले परिवर्तन गर्नु पर्ने कर्तव्यको कुरा गर्छ (यदि सम्भव भएमा), तर कार्यमा नैतिक समस्यालाई संकेत गर्दैन।
5. एक व्यक्तिले आफ्नो जीवन शैली परिवर्तन गर्नु पर्दैन किनभने यसले उसको आमाबाबुलाई कष्ट दिन्छ। छोरोले जीवनसाथी छनोट गर्दा आमाबाबुको आज्ञा मान्नुपर्ने छैन भनी रामयोडमा उद्धृत गरिएको रिकीबाट थाहा हुन्छ, र मैले आमाबाबुको सम्मान गर्ने मेरो लेखमा यसलाई विस्तार गरेको छु।
6. असफलता र भयानक क्षति रिपोर्ट गर्ने धेरै चिकित्सकहरू छन्। म उपचारले काम गर्न नसक्ने प्रश्नमा गएको छैन, तर तपाईले अवस्थालाई धेरै गुलाबी रूपमा वर्णन गर्नुभयो। यस्तो जोखिम लिनको लागि व्यक्तिको आवश्यकता धेरै बलियो आधारमा हुनुपर्छ। र फेरि, धार्मिक स्तरमा पक्कै पनि त्यस्तो आवश्यकता छ, तर यसलाई नैतिक दायित्वको रूपमा हेर्नु म धेरै शंकास्पद छु। कुनै कृतज्ञताले व्यक्तिलाई यस्तो भयानक पीडा र मानसिक जोखिममा प्रवेश गर्न बाध्य पार्दैन। आमाबाबुले आफ्नो दिमाग परिवर्तन गर्ने र निराशाबाट छुटकारा पाउनको लागि रूपान्तरण उपचारमा जान्छन्, यो धेरै सजिलो र अधिक वांछनीय छ (नैतिक, हलाखिक होइन)।
7. अन्तिम टिप्पणीहरू एकदमै एकतर्फी र पक्षपातपूर्ण विवरण हुन् (र म धेरै कोमल भाषा प्रयोग गर्छु)। यो तपाईलाई स्पष्ट छ कि यदि तपाई वास्तवमा विरोध नगर्नु भएको थियो र यो स्थितिमा तपाईले यसलाई त्यसरी देख्नुहुने थिएन। सरोगेसी भनेको ज्येष्ठ नागरिकबीचको सम्झौता हो। र यसबाट जे पनि उत्पन्न हुन सक्छ, एक प्रयास र रोकथाम गर्नुपर्छ। यसले कार्य आफैमा ढिलाइ गर्दैन। दान दिनुले पनि मानिसहरूलाई पैसा सकिन सक्छ र तिनीहरूले चोरी गर्न सक्छन्। यिगल अमिरलाई एक धार्मिक विश्वास भएको भनिएको थियो जसले हत्या र चरम कार्यहरू निम्त्याउन सक्छ। के यही कारणले धार्मिक आस्था त्याग्नुपर्छ ?
एक नियमको रूपमा, जब तपाइँ सबै प्रकारका तर्कहरू उठाउनुहुन्छ र कुनै कारणले सबैलाई एउटै दिशामा अन्तिम बिन्दुमा, म शंका गर्छु र मेरो निर्णयलाई पुन: जाँच गर्नेछु।
तपाईंले उठाउनुभएको सबै बिन्दुहरूको विस्तृत छलफलमा नजाइकन - म रूपान्तरण उपचारहरूमा छलफल गरिएका जोखिमहरूको बारेमा मात्र एउटा टिप्पणी गर्नेछु।
सबैभन्दा पहिले, यो बुझ्नुपर्छ कि प्रस्ताव गरिएका सबै उपचारहरू उपयुक्त छैनन्, र त्यहाँ उपचारहरू छन् जुन कसैको लागि उपयुक्त हुन सक्छ र अर्कोको लागि विनाशकारी हुन सक्छ, जस्तै लागूपदार्थको साथ, जहाँ एकले अर्कोलाई मृत्युको ढोकामा पुर्‍याउन मद्दत गर्दछ, त्यसैले चिकित्सा मा सबै कुरा अर्को विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक द्वारा गर्नुपर्छ सावधान निदान र व्यक्ति को उपचार को प्रकृति को होशियारी समायोजन।
र दोस्रो कुरा, समलैंगिकताको सम्पूर्ण मुद्दामा विज्ञानले एकदमै अन्धकारमा डुबेको छ भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्दछ (वैसे, अन्धकारको ठूलो भाग स्वैच्छिक छ, सचेत रूपमा कुनै पनि बाटो खोज्ने प्रयासलाई अवरुद्ध गर्दछ, किनभने धेरै अनुभव समलिङ्गी पहिचान को एक विधर्म र वैधता हो)।
निको पार्ने प्रयासहरूमा श्रेय दिइएको प्रमुख जोखिमहरू मध्ये एक उपचार प्रयासको विफलताको कारण पूर्ण निराशाको डर हो। यद्यपि, जब तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि यी नवीन र प्रयोगात्मक उपचारहरू हुन् - अपेक्षाहरूको स्तर धेरै मध्यम छ, र तदनुसार असफलताको निराशाले व्यक्तिलाई पतन गर्दैन। र बुझ्नुहोस् कि यसरी यस पलमा 'गएको छैन' भोलि अलि फरक दिशामा सफल हुन सक्छ, 'र भोलि छैन भने परसैं' 🙂
एकातिर, परमेश्वरले टोराको विपरीत रहेको यस प्रवृत्तिको उपचार खोज्न मानवजातिलाई ठूलो चुनौती खडा गर्नुभएको छ भन्ने विश्वासको सुरुवात बिन्दुबाटै गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, अगाडिको बाटो लामो छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले स्पष्ट समाधान पाउन सकेका छैनौँ ।
यो मानवताका सबै समस्याहरूको मामला हो, जब एक उपचार खोज्ने प्रयास गर्दै - उन्नत। कहिलेकाहीँ दशकहरू, कहिलेकाहीँ सयौं, र अझ धेरै, र अझै पनि निराश र लामो समय सम्म र हरेक सम्भावित दिशामा खोजी गर्न जारी राख्नुहोस्, जबसम्म अचानक सफलता आउँदैन।
पहिलो, यी विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकहरूको रिपोर्टहरू हुन्।
दोश्रो, उपचार नपाएसम्म सबै कुरा कुहिरोले भरिएको छ भने त्यो मान्छेबाट के आशा गर्ने ? प्रभावकारी उपचार बिना नैतिक हुन र समलिङ्गी हुनु हुँदैन?
ए। समाधान खोज्नुहोस्।
पेशेवरहरूसँग परामर्श र व्यावसायिक साहित्य पढ्ने व्यक्तिलाई उसको व्यक्तित्व र उसको समस्याको कारणहरूमा नयाँ अन्तरदृष्टि ल्याउन सक्छ, जसबाट उसले आफैंमा नयाँ समाधानहरू फेला पार्न सक्छ, सायद विज्ञहरूले सोचेका दिशानिर्देशहरू पनि।
बि. कठिनाईलाई चुनौती बनाउनुहोस्।
जसरी मानिसहरू गेमारा वा 'एज्स' मा एक अस्पष्ट मुद्दालाई क्र्याक गर्न प्रयास गर्न रमाइलो गर्छन्। यहाँ केटाले एक आकर्षक चुनौती पायो - आफ्नो जीवनको पहेली तोड्न। आफैलाई सोध्नुहोस् कि उसको प्रेम र आवेगलाई के जगाउँछ र तिनीहरूलाई शान्त बनाउँछ? आफ्ना साथीहरूप्रति उहाँको माया जगाउने गुणहरू के के हुन् भनी पहिचान गर्नुहोस्? र सायद यस्तो गुण भएको महिला पनि छ कि जसले उसको प्रेमलाई जगाउन सक्छ र पछि सायद 'अतिरिक्त' यौन आकर्षणको स्थिरतालाई पनि पगाल्छ।
तेस्रो। 'सीधा' प्रति दयाको भावना पनि विकास गर्नुहोस्
सडकमा हिड्ने असहनीय कठिन अनुभवको सामना गर्नेहरू जहाँ उनीहरू लगातार महिलाहरूले सामना गर्छन् जसको हरेक पहिरन, वा गैर-पोशाक, सडकमा जानेहरूको प्रवृत्तिलाई उत्तेजित गर्न डिजाइन गरिएको हो।
D. हरेक सफलताको लागि आफूलाई कसरी 'पर्गन' गर्ने थाहा छ, सानो र आंशिक पनि।
आफ्नो सृष्टिकर्ता हरेक सफलता संग, र वृत्ति को हरेक अस्वीकृति देखि कत्ति खुशी छ भनेर सोच्न। सुरुमा केही घण्टाको लागि वृत्तिको स्थगनको स्वाद लिनेछ; पछि केहि दिन को लागी, र पछि त्यो भन्दा धेरै को लागी। जसरी नराम्रो प्रवृत्ति समय-समयमा आउँछ, थोरै सुरु हुन्छ र धेरैमा जारी रहन्छ, त्यसैगरी ‘धेरै हदसम्म’ राम्रो प्रवृत्ति - आजसम्म जारी रहन्छ!
भगवान। रोचक कार्यहरूमा संलग्न हुन।
अध्ययन, काम, संगीत, स्वयंसेवा र यति। के यो मिश्रको राजा फारोले हामीलाई सिकाएको होइन: 'कामले मानिसहरूको सम्मान गरोस् र तिनीहरूलाई झूटले बचाउन नदिनुहोस्', र हाम्रा रब्बीहरूले हामीलाई सिकाउनुभएन:
र। लगातार 'समस्या' मा डुब्नु हुँदैन।
यो सत्य हो।'समस्या' 'पहिचान' बन्छ। बुझ्नुहोस् कि प्रत्येकको आफ्नै जुनून र पतन हुन्छ, र यसको विपरितमा 'बहु भलाइ' शिखरहरू र सफलताहरू प्रशस्त छन्। जसरी इजिप्ट असफलताको बारेमा हो, त्यसरी नै जीवनको सफलता र असल कामहरूमा धेरै पटक रमाईलो गर्नुपर्दछ, जुन ठ्याक्कै किनभने तिनीहरू दुःख र कठिनाइको साथ आउँछन्, ठाउँको लागि धेरै, धेरै मूल्यवान छन्।
P. 'किनकि भगवानको आनन्द नै तिम्रो शक्ति हो'।
संसारमा परमेश्वरको उपस्थिति जति धेरै महसुस हुन्छ - उहाँमा ठूलो आनन्द। 'मैले सधैं मेरो सामु प्रभुलाई सोधेको छु किनभने म दाहिने हातमा लड्ने छैन', र अनुयायीहरूले माग गरेझैं: 'किनकि तपाईं आनन्दमा बाहिर आउनुहुनेछ' - आनन्दमा। जीवनका सबै चालहरू ईश्वरसँग साझा गर्न, सबै असल कुराहरू स्वीकार गर्दै र हराएकोको लागि सोध्ने, व्यक्तिको लागि र सम्पूर्ण समुदायको लागि। जब तपाईं आनन्द र हल्कापनको साथ जीवनमा जानुहुन्छ - तपाईंले सबै अवरोधहरू फ्याँक्नुहुन्छ।
यी वीरतापूर्वक सामना गर्ने केही आधारभूत कुराहरू हुन्, र सम्भवतः जो कोहीले पनि आफ्नो अनुभव र अरूको अनुभवबाट अझ राम्रो सल्लाह पाउन सक्छन्, 'बुद्धिमान र बुद्धिमानीहरूलाई थप जान्न दिनुहोस्'।
अभिवादन। तिम्रो एउटा वाक्यमा म सहमत भएन । तर जब मैले उनीहरूलाई प्रतिक्रिया दिन थालेँ (नैतिकता र हलखाह बीचको बारम्बार मिश्रण, नैतिकताको पूर्ण रूपमा विकृत अवधारणा, र यस्तै अन्य), मैले केहि बिन्दुमा महसुस गरें कि यो असहमति होइन। चीजहरू केवल अपमानजनक छन्। यदि तपाईंले मलाई अनुमति दिनुहुन्छ भने, मलाई लाग्छ कि मैले एक पटक रब्बी शालोम शेभड्रनबाट सुनेको निम्न कथाले कुरालाई धेरै स्पष्ट पार्छ। उनले एकपटक सडकमा लडेर घाइते भएको केटालाई देखे र उनलाई उठाएर अस्पतालतर्फ दौडिन थालेको बताए । बाटोभरि, झ्यालबाट आएका मानिसहरू र यात्रुहरूले उहाँलाई अभिवादन गरे, जस्तै "रब्बी शालोम, पूर्ण औषधि" (यिद्दिशमा, अवश्य)। र यसरी उनी दौडे र दौडे र सबैले इच्छा गरे। केही मिनेट पछि उसले आफ्नो अगाडि एउटी महिला टाढाबाट उहाँतिर हिंडिरहेको देख्छ र पक्कै पनि उनी पनि अरू सबैजस्तै उहाँलाई चिच्याइन्, "रब्बी शालोम, पूर्ण निको हो।" बिस्तारै ऊ उनको नजिक आयो र उनको आवाज अलि कमजोर भयो। अन्तमा जब उनले अन्ततः यो को हो भनेर देखे (= उनको छोरा, अवश्य पनि) उनी डरले चिच्याउन थालिन्। यस बिन्दुमा उनको इच्छा र सल्लाह समाप्त भयो। नि: शुल्क अनुवादमा: मैले एक पटक जन्मजात विकृतिको कारणले गर्दा एकजना मानिसले आफ्नो जीवनभर कष्ट भोगेको देखें। आफ्नो जीवनभरि उसले आफ्नो भारमा भारी हिंड्दा सबैले उसलाई भने, "तपाईले कठिनाईलाई चुनौती बनाउनु पर्छ," वा "आफ्नो व्यक्तित्वमा अन्तरदृष्टि प्राप्त गर्नुहोस्।" अरूले पनि उनलाई नि: शुल्क सल्लाह दिए: "कठिनाईबाट निर्माण हुनेछ।" उनले "गाउँबाट फाइनल" भनेका थिए। यसमा थप्नुहोस् "प्रत्येक सफलताको लागि आफैलाई कसरी प्रशंसा गर्ने जान्नुहोस्, आंशिक रूपमा पनि।" अरूले उहाँलाई सूचित गर्न यति टाढा गए: "हाम्रो लागि दयाको भावना कि हामीले पीडा र सूपको पीडाबाट पीडित छैनौं" (= तपाईलाई कस्तो रमाइलो छ!)। वा "निरन्तर समस्यामा डुब्नुको सट्टा, रोचक कार्यहरूमा संलग्न हुनुहोस्।" र पक्कै पनि, "परमेश्वरको आनन्द बलियो छ।" मेहाड्रिनका मेहद्रिनले यहाँ थप्नेछन्: "साँचो, लगभग कोही पनि वास्तवमै सफल हुँदैनन्, तर मैले सुनेको छु कि समुद्रको मात्रामा त्यहाँ ती व्यक्तिहरू छन् जसले आफ्नो तलब र बिरामीहरूमा सयौं सुन लिन्छन् (यदि उनीहरूलाई निश्चित रूपमा साँचो सम्मान गरिएको थियो र। यदि तिनीहरू साँचो पेशेवरहरूमा गए भने) हो सफल भयो। भगवान रब्बी शालोमलाई मद्दत गर्नुहोस्। ” यदि तपाईं यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र कसैले तपाईंलाई यो सबै राम्रो सल्लाह ल्याउँछ भने तपाईंलाई कस्तो लाग्छ भन्ने मलाई पक्का छैन। मलाई थाहा छ म के महसुस गर्छु। तपाईंले समाप्त गर्नुभयो र भन्नुभयो कि सबैले आफ्नो अनुभवबाट थप राम्रो सल्लाह पाउन सक्छन्। यस्तो अवस्थाको सम्बन्धमा मैले मेरो अनुभवबाट लिएको एउटा मात्र राम्रो सल्लाह म तपाईलाई बताउँछु: कि अन्तिम चीज चाहिन्छ यो प्रकारको सुझावहरू हो। मलाई लाग्छ कि उहाँको लागि सत्य स्वीकार गर्नु राम्रो हो र हामीसँग कुनै सल्लाह छैन भनेर भन्नु राम्रो हो, तर म के गरूँ र मेरो स्वर्गमा हुनुहुने पिताले मलाई (धार्मिक र अनैतिक आदेश) आदेश दिनुभएको छ।
यो सम्भव छ कि रब्बी लेभिङ्गरका शब्दहरू शान्त स्वरमा भनिएको हो किनभने उहाँ समस्याबाट टाढा हुनुहुन्छ। उसलाई र अरूलाई त्यो छोराको आमा जस्तो लाग्दैन। यसको मतलब यो सही जवाफ होइन। परिस्थितिको सबै दया र समस्याग्रस्तता पछि, उहाँका शब्दहरूले एक धार्मिक समलिङ्गीले के गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भन्ने कुरा एकदमै नराम्रोसँग जोडिएको छ। त्यो भन्दा बढि - उहाँका शब्दहरूले प्रत्येक यहूदीले के गर्ने अपेक्षा गरिएको छ त्यो नराम्रो होइन। कुनै पनि व्यक्तिलाई दया गर्न सम्भव छ (दया एउटा सापेक्षिक कुरा हो जुन सबैलाई थाहा छ), हामी सबैसँग समस्या र समस्याहरू छन्, र यहूदीहरूले उनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ।
पहिलो, कोही समस्याबाट टाढा छ भन्ने तथ्यले उसलाई त्यस्तो अलगाव र त्यस्ता नाराका साथ बोल्न वा नबोल्न लगाउनु पर्छ।
मैले जवाफहरूको बारेमा मात्र होइन तर तिनीहरूले बोलेको स्वरको बारेमा कुरा गरिरहेको थिएँ। तर जवाफहरू पनि आफैं गलत छन्। पहिलो, यहाँ कुनै नैतिक समस्या छैन, र पूरै बहस यहीँबाट सुरु भयो। दोस्रो, यी अधिकांश सुझावहरू उपयोगी छैनन्। कतिपयले वास्तविकतालाई छनोटपूर्ण र पक्षपाती रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। अर्को भागले उनलाई निष्क्रिय सान्त्वनाको साथ सान्त्वना दिन्छ। पीडा भोग्ने व्यक्तिले कारीलाई जित्ने निर्णय गर्न सक्छ र हुनसक्छ ऊ सफल हुनेछ, तर तपाईंले उसलाई करीले जित्ने र ईश्वरको आनन्द उसको गढ हो भन्ने पक्षबाट सल्लाह दिन सक्नुहुन्न। र त्यसपछि उसलाई थप्नुहोस् कि ऊ अनैतिक छ किनभने उसले आफ्ना आमाबाबु र आफ्नो सृष्टिकर्तालाई निराश पार्छ।
यसबाहेक, संभावनाहरू छन् कि उसले सामना गर्न सक्षम हुनेछैन, जसरी हामी मध्ये प्रत्येक आफ्नो परिस्थितिमा सफल हुनेछैनौं। त्यसको सन्दर्भको पनि अपेक्षा गर्दछु । उहाँलाई भन्नुहोस् कि यो भयानक छैन, किनकि यो धेरै गाह्रो र लगभग असम्भव काम हो। यो चिमटीको साथ चयन गरिएका खाली पदहरू र अस्पष्ट विशेषज्ञहरूलाई उद्धृत गर्नुको सट्टा र उसलाई मद्दत नगर्ने हो (जबसम्म तिनीहरू "पेशेवर" छैनन्, संसारका सबै मनोचिकित्सकहरू भन्दा फरक, तर यदि उसले विश्वास गर्छ र दृढ छ भने।
यदि तपाइँ यस्तो व्यक्तिको नजिकको साथी हुनुहुन्छ र तपाइँसँग उसलाई थप दृढ कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने र समर्थन गर्ने क्षमता छ - यो सम्भव हुन सक्छ। तर यस्तो भयानक अवस्थाको सामना गर्नको लागि सामान्य विद्यालय सल्लाहको रूपमा होइन।
मेरो टिप्पणी छिट्टै यहाँ आउनेछ, र त्यहाँ यो अलि स्पष्ट हुनेछ।
गत बिहीबार, रब्बी माइकल अब्राहम नेरुले आफ्नो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन "मानिसले के गर्नुपर्छ" भनेर सोधे। र मैले एक धार्मिक इच्छा गर्न संकल्प गरें, र मैले थाहा पाएको र मेरो अनुभव अनुसार उहाँको प्रश्नको जवाफ दिएँ।
NH को एक यहूदीको रूपमा, जसले अरू सबैजस्तै, 'उहाँले कति साहसिक कार्यहरू देख्नुभयो', संकट र छालहरू, उतार-चढावहरू, आदि, इत्यादिहरूबाट गुज्रनुभयो - मैले कार्य गर्ने तरिकाहरू र सोच्नको लागि संक्षेप गर्न सक्षम भएँ। मेरो समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्नुहोस्, र अरूलाई उहाँका समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
मैले साँच्चै अर्को बिन्दु बिर्सें, जुन तपाइँको शब्दहरूमा आयो, र यो सायद पहिलो र प्रमुख हो:
एच। सबैभन्दा तनावपूर्ण परिस्थितिहरूमा कम्पोजर र कम्पोजर राख्नुहोस्।
के दिने र के ले तपाइँको रिस गुमाउछ? जब तपाइँ चिन्ता, भ्रम र 'तनाव' बाट बाहिर काम गर्नुहुन्छ - तपाइँ मात्र संलग्न हुनुहुनेछ र माटोमा डुब्नुहुनेछ।
त्यसैले आफैलाई समात्नुहोस्, र शान्तपूर्वक स्थितिको विश्लेषण गर्नुहोस्। तपाईंले विषय सिक्नुहुनेछ, किताबहरू र पेशेवरहरूबाट; र कम महत्त्वपूर्ण छैन, आफैंको लागि सिक्नुहोस्: जान्नको लागि के तपाइँलाई तल ल्याउँछ र तपाइँलाई के ल्याउँछ? के चित्त दुखाउने र सुखदायक के हो?
वास्तवमा, मनोवैज्ञानिकहरू र सल्लाहकारहरूले के गर्छन्: तपाईंसँग बस्नुहोस् र तपाईंसँग 'मानसिक अंकगणित' गर्नुहोस्, र त्यसबाट तपाईं समस्याको जरा र समाधान गर्ने तरिकाहरू बारे अन्तर्दृष्टिमा आउनुहुनेछ।
छोराको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिने ‘बच्चाकी आमा’ बारे तपाईको टिप्पणी स्पष्ट छैन। मैले पनि आफ्नो छोराको समस्याको सामना गर्दा आमाबाबुको भयानक पीडाको बारेमा टिप्पणी गरें, तिनीहरूको हृदयमा तिनीहरूको रोदन जित्दा पनि अवस्थित छ।
भगवानको आज्ञामा बाँधिरहने यित्चाक पनि - आफ्नो अनुहार परिवर्तन गर्ने आमाको पिडाले उनको मन दुख्छ, नब्बे वर्षसम्म जन्मेको छोरो आगो र खानाको लागि थियो, म आमाको लागि दुखी छु। रुनुहोस् र रुनुहोस्'। हामी जोसेफको रूपमा आशिष् पाउन सक्छौं कि हाम्रा आमाबाबुको चित्रको छवि कठिन परीक्षणको समयमा हामीसँग खडा हुनेछ।
पहिलो, मैले आफ्नो वरिपरि हेरे तापनि मैले यहाँ कुनै धर्मी मानिस भेटिनँ जसको इच्छा पूरा गर्न चाहन्छु, मैले बहसको आँधीमा लेखेका कुराहरूको तीखोपनको लागि माफी माग्नुपर्छ। श्रीमानले सामान्य रूपमा संकेत र विनम्रताका साथ टिप्पणी गर्नुहुन्छ, र म मेरो अधर्ममा आँधीबेहरी मान्छे।
मलाई लाग्छ कि पृष्ठभूमिमा तपाईंले यस विषयको अनैतिकताको बारेमा गरेको दावीहरू थिए जसमा म कडा रूपमा असहमत थिए र पछि आएका अन्य तीतो शब्दहरूमा पनि उनीहरूले छाप र छाप छोडे। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ चीजहरू प्रस्तुत गर्दा एकपक्षीयता पनि थियो, र उनी मलाई अलि पराएजस्तो देखिन्थे।
अन्तमा, तपाइँको टिप्पणीहरूमा अनिर्णित व्यक्तिको लागि सहयोग पाउन सम्भव हुन सक्छ, तर मलाई अझै पनि लाग्छ कि यसलाई अलि फरक सन्दर्भमा राख्नु राम्रो हो, जसरी मैले छलफलमा टिप्पणी गरें।
सबैलाई शुभकामना र पुन: माफ गर्नुहोस्।
पीडितलाई भन्नुहोस्:: तिमी हराएको छौ। तपाईंसँग कुनै मौका छैन। अस्पताल जानुको कुनै अर्थ छैन । सिधै कब्रिस्तानमा जानुहोस्।
त्यसपछि आत्महत्याको गुनासो । र सायद तपाईका असल मान्छेहरूले पीडितहरूलाई निराशा र आत्महत्यामा ल्याउँछन्?
अर्को तरिका पनि छ। तिनीहरूलाई व्यावहारिक सल्लाह दिन सम्भव छ (यद्यपि त्यहाँ धेरै कम दुर्भाग्य छ, र यो इमानदारीपूर्वक स्पष्ट गर्न लायक छ र सेतो धुने होइन), तर सल्लाह बिना यी सुझावहरू छैनन्, र तपाईंले प्रस्ताव गर्नुभएको समस्याग्रस्त आरामहरू बिना निराशालाई मात्र गहिरो बनाउनेछ (। परमेश्वरको आनन्दलाई बलियो बनाउँदै)।
र यो पक्कै पनि सही छैन कि तिनीहरूलाई गुलाबी र अविश्वसनीय चित्र (जस्तै यी असफलहरू अव्यवसायिक चिकित्सकहरू हुन्, र विश्वासीहरू सफल छन्)।
र तिनीहरू अनैतिक छन् भनेर तिनीहरूलाई व्याख्या गर्न पनि कम सत्य हो किनभने तिनीहरूका आमाबाबुले तिनीहरूमा लगानी गरेका छन् र तिनीहरूका सृष्टिकर्ताले तिनीहरूबाट आशा गर्नुहुन्छ र तिनीहरू असफल हुन्छन् र तिनीहरूको विश्वासमा हुर्केका छन्। के तपाई गम्भीर हुनुहुन्छ? पीडाहरूको जवाफ यसरी दिइन्छ (आर. बरार र यित्जा एए, ७)?
र तपाईंले प्रस्तुत गर्नुभएको नैतिकताको अवधारणाको बारेमा पनि। र यदि मेरो आमाबाबुले मलाई मेरो जीवनभर मेरो पीठमा एक सय किलोग्राम बोक्न चाहानुहुन्छ भने, मैले कृतज्ञताको रूपमा यो गर्नुपर्छ? यस्तो नैतिक आरोप छ? मैले तपाईलाई महरिकलाई जीवनसाथी छनौट गर्ने बारे सम्झाएको छु। हामीले हलखाहको होइन नैतिकताको चर्चा गरिरहेका छौं भन्ने मैले उल्लेख गरेको छु । यस्तो हलाखीक चार्ज हुनुपर्छ। तर नैतिक आरोप छ भन्नु त ? क्षमा, यो केवल बाङ्गो छ। सामान्यतया, भगवान प्रति कृतज्ञता बिल्कुल सरल छैन, र मेरो विचारमा नैतिकता संग सम्बन्धित छैन तर दर्शन संग। यहाँ लेखहरू हेर्नुहोस्:
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/מעבר यी सबैको लागि, उनीहरूलाई सान्त्वना दिन धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि यदि तिनीहरू असफल भए पनि, लगभग सबैजना पनि यसको पक्षमा उभिने छैनन्। र हामीले पहिले नै केतुबोट ल्यागमा फेला पारेका छौं यदि उनको लागि होइन भने हनन्याह मिशाएल र अजरियाह फोटोग्राफरलाई हुक गरिएको खण्डहरू, निरन्तर हल्का पीडा र ठूलो तर स्थानीय र क्षणिक पीडा बीचको भिन्नतामा राम्रो नाम दिइएको छ।
सफलताको सम्भावनाहरू बारे शब्दहरू हाम्रो क्षेत्रका शीर्ष पेशेवरहरू मध्ये एक, शिलो इन्स्टिच्युटका निर्देशक डा. Zvi Mozes को शब्दहरू हुन्। र उहाँ स्पष्ट रूपमा भन्नुहुन्छ कि परिवर्तनको स्पष्ट प्रवृत्ति धेरै गाह्रो छ, तर धेरै दृढ र दृढ विश्वास भएका व्यक्तिहरू उचित व्यावसायिक मार्गदर्शनले सफल हुन सक्छन्।
बाँकी मेरो भनाइ स्पष्ट कुरा हो । के तपाईंलाई लाग्छ कि रब्बी कोलोनले एक व्यक्तिलाई सम्झनाको लागि विवाह गर्न अनुमति दिन चाहन्छ? 🙂 कसले मानिसलाई आफ्नो भावनाको वेदीमा आफ्ना आमाबाबुलाई पछ्याउन अनुमति दियो? यदि उसले दरबारमा भागेन भने, उसले कालो लुगा लगाउनेछ र आफैलाई कालो आदिमा बेर्नेछ। ”र भयानक शोकमा आफ्ना आमाबाबुको जीवन बर्बाद गर्दैन।
दुःखमा उसको समस्याबाट कोही पनि बच्दैन। कुनै पनि सामाजिक कार्यकर्तालाई सोध्नुहोस् उसले तपाईलाई बताउनेछ
, तत्वहरूको आधार भनेको व्यक्तिलाई पीडितको भावनाबाट बाहिर निकाल्नु हो। एक पटक एक व्यक्तिले आफ्नो भाग्यको लागि जिम्मेवारी लिन्छ - उसले पहिले नै मुक्तिको बाटो फेला पार्नुहुनेछ। र यदि यो अपमानजनक छ - यो पनि अपमानजनक छ, आक्रोशको भाषा ..
"हाम्रो क्षेत्र" लाई सम्पुर्ण सम्मानका साथ तपाईले पूर्णतया फरक स्थितिलाई बेवास्ता गरिरहनु भएको छ जुन आज लगभग एक पेशेवर सहमति हो (म विज्ञ होइन र मलाई यो सहमतिको बारेमा केहि शंका पनि छ, र तैपनि तपाईले यसलाई कलमको फ्लिकमा बेवास्ता गर्नुहुन्छ। किनभने डा. यसबाहेक, उहाँका आफ्नै शब्दहरू, कम से कम तपाईंले तिनीहरूलाई उद्धृत गरेझैं, धेरै अनिच्छुक छन्। म यो पनि भन्न सक्छु कि यदि तपाई धेरै विश्वासी र धेरै दृढ हुनुहुन्छ र तपाईको झुकाव पूर्ण छैन भने तपाईले जित्न सक्नुहुन्छ। कति ओटा छ त्यहाँ? अनि अरु कति ? तीमध्ये कति सफल भए ? के उसले नम्बर दियो? विज्ञानले मात्रात्मक अनुमानका साथ काम गर्छ, नाराहरूसँग होइन (सम्भवतः उहाँले यो सबै ल्याउनुभयो, तर तपाईंले भन्नु भएको कुराबाट मैले यसको केही देखेको छैन)।
तपाईंको बाँकी टिप्पणीहरू वास्तवमै स्पष्ट छन्, तिनीहरूका पूर्ववर्तीहरूले जस्तै। यहाँ कसले भन्यो कि महरिकले सम्झाउन दिन खोजेको हो ? र हामी न्यायाधीशहरूसँग व्यवहार गर्दैछौं?! यदि तपाईंले बुझ्नुभएको छैन भने, म मेरो दावी बुझाउँछु। तपाईंको विधिमा आमाबाबुको अपेक्षाहरू पूरा गर्न नैतिक दायित्व छ किनभने उनीहरूले मलाई जन्म दिए र ममा लगानी गरे। त्यसोभए यदि तिनीहरूले मलाई एक निश्चित जीवनसाथीसँग विवाह गर्न सोध्छन् र अज्ञातसँग होइन - तपाईंको विचारमा मैले उनीहरूको आज्ञा पालन गर्नुपर्थ्यो, हैन? अवश्य पनि छ। तर के गर्ने, उसले होइन भन्यो (अनि राममा पनि शासन भयो)। यहाँ नैतिकता कहाँ छ? अर्थ: जीवनसाथी छनौट गर्दा आमाबाबुको आज्ञा पालन गर्न कुनै नैतिक दायित्व छैन। उनीहरूलाई मेरो जीवनको बारेमा मसँग माग गर्ने अधिकार छैन। त्यसोभए सम्झिएर नआए पनि के फरक पर्छ र ? तिनीहरू बीचको भिन्नता हलाखिक छ, तर तपाईंले आमाबाबुको माग पूरा गर्न नैतिक दायित्वको बारेमा कुरा गर्नुभयो, र यस विषयमा कुनै भिन्नता छैन। यसको विपरित, छोराको सट्टा महिला छनोट गर्नु ठूलो पीडा हो र छोराको लागि लगभग असम्भव छ, तर एक जोडीलाई अर्कोसँग बदल्नु एक अतुलनीय सजिलो कुरा हो। त्यसोभए उसले यो किन गर्नुपर्दैन? र तपाईंको भाषामा: जसले एक व्यक्तिलाई आफ्ना आमाबाबुलाई बाँध्न र उनीहरूको जुनूनको वेदीमा डरलाग्दो हृदयघात गराउन अनुमति दियो जसले उसलाई आफूले चाहेको जीवनसाथीमा लैजान्छ। जसले आफ्नो जुनूनलाई डंक्नेछ र अर्को जोडी लिनेछ र आफ्ना प्यारा आमाबाबुलाई सबैभन्दा पवित्र सन्तुष्टि दिनेछ। र सामान्यतया, यदि उहाँ सहज र उहाँको लागि गाह्रो छैन भने - उसलाई दृढ हुन दिनुहोस् र विश्वास गर्नुहोस् र डा. मोसेसकहाँ जानुहोस् र उसले उसलाई जित्न मद्दत गर्नेछ। समस्या के हो?
र तपाईको शब्दको अन्त्यको लागि, क्यान्सर भएको व्यक्तिले आफूमा विश्वास गर्न सक्यो भने मात्र उसले बचाउने बाटो भेट्टाउनेछ। र यस्तै अन्य सबै पुरानो रोगीहरू छन्। यी नाराहरू हुन् जुन निस्सन्देह उदासीनता र शंकास्पद नयाँ युगको मूर्खता हुन्। तिनीहरूले मलाई रास शेभड्रनको कथामा फर्काउँछन्। तपाईले अरूको बारेमा कुरा गर्दा यो भन्न सजिलो छ कि तपाईलाई वास्ता छैन। कुनै पनि सामाजिक कार्यकर्तालाई सोध्नुहोस्, उसले तपाईंलाई यो बताउनेछ।
अन्त्यबाट सुरु गरौं:
मैले भनेको होइन कि क्यान्सर भएको व्यक्तिलाई बचाउनु पर्छ। मैले भने कि निको नहुने गम्भीर रोग लागेको व्यक्ति उपचारको खोजीमा छ । राजा हिजकियाह, परमेश्वरका अगमवक्ता, उसलाई भन्छन्, 'किनकि तिमी मरेका छौ र तिमी बाँच्ने छैनौ।' तिमीले खोजी खोज्यौ, तिमीले मायाले स्वर्गको न्याय पाएका थियौ, निको पार्ने अनुमति डाक्टरलाई दिइयो – निराश नहुनु ।
त्यहाँ एक प्रिय यहूदी, आर. कोहेन-मेलमेड, जो 15 वर्ष भन्दा बढी पहिले मांसपेशी डिस्ट्रोफीबाट पीडित थिए, र त्यसपछि एक डाक्टरले उहाँलाई बताउनुभयो कि उहाँ बाँच्नको लागि केहि महिना मात्र बाँकी छ। र आजसम्म बाँच्छन् र पुस्तकहरू लेख्छन् यस बीचमा उनी डाक्टरको अन्त्येष्टिमा भाग लिन सफल भए जसले उनलाई उनको आसन्न मृत्युको आश्वासन दिए:
प्रवृत्ति बारे -
म दार्शनिक र वैज्ञानिक छलफल गर्न आएको होइन, हो यो सम्भव छ कि सम्भव छैन ? - म मेरो आँखा अगाडि एउटै व्यक्तित्व देख्छु, आफ्नो झुकाव र विश्वासको बीचमा फसेको भ्रमित र लज्जित युवा मानिस। यसका सृष्टिकर्ता र सृष्टिकर्ता दुवैबाट बाहिर जाने संसारमा कुनै उपाय छैन। उसको दरारबाट बाहिर निस्कने एकमात्र मौका समाधान खोज्नु हो, र म ठेगाना खोज्दै छु जहाँ उसले समस्या समाधान गर्ने सम्भावना छ।
म 'मानसिक सल्लाह' देखि अलिकति डराउँछु, धेरै कारणहरूका लागि: तिनीहरू धेरै आशावादी छन्, र एक केटा जो उच्च स्तरको अपेक्षा र विशेष गरी तत्काल सफलताको आशा लिएर आउँछ, निराश हुन सक्छ। त्यो बाहेक, त्यहाँ केही चिकित्सकहरू गैर-व्यावसायिक स्वयंसेवकहरू छन्। र तिनीहरूको 'दोहोरिने विधि' को लागि, जसले 'पुरुषत्वलाई सशक्त बनाउन' प्रयास गर्दछ - केहि केसहरूको लागि मात्र राम्रो, र यो सबै केसहरूको कारण हो जस्तो मलाई लाग्दैन।
यसैले म डा. Zvi Mozes को दिशामा फर्कें, जसलाई म व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिन, तर जसको आशावादी तर धेरै सतर्क शैलीले ममा सतर्क आशावादी प्रेरणा दिन्छ। तपाईसँग, मैले उहाँलाई संक्षिप्त रूपमा मात्र उद्धृत गरेको छु। योभ सोरेकका दुई लेखहरूमा मेरो टिप्पणीहरूमा, मैले सम्भावनाहरू र तिनीहरूका सम्भावनाहरूलाई स्पष्ट पार्ने टिप्पणीहरूमा दुई मुख्य अनुच्छेदहरू प्रतिलिपि गर्न समस्या उठाएँ (किनभने 'लिंक' मलाई थाहा छैन कसरी गर्ने, यस बीचमा म 'लिंकपोभ' निको नहुने छु :) ।
क्षेत्र मा एक अनुभवी थेरापिस्ट को अनुभव, पैदल हिड्दैन ... र यो हाम्रो कर्तव्य हो कि यसको अस्तित्व बारे अनिर्णित लाई जानकारी गराउनु, र यसबाट सहयोग लिने प्रयास गर्ने सम्भावना।
महरिकमा छोराले आमाबाबुको केही ऋणी हुँदैन भन्ने तपाईंको व्याख्या पूर्ण रूपमा अस्पष्ट छ। मलाई लाग्छ कि केहि मानिसहरूले बुझेका छन् कि यो एक बुबाको सम्मानको बारेमा हो जुन एक महिलासँग विवाह गर्न छोराको मिट्ज्वाको कारण अस्वीकार गरिएको थियो, कि यदि उसले कोषेर महिला भेट्टायो र उसले म्यान मिफिसलाई माया गर्यो भने उसले उसलाई फेला पार्छ? डा. मोसेसले कोनोलाई निषेधित विवाहबाट अलग हुन चाहने, तर स्वर्ग र मानव जातिसँगको राम्रो विवाहबाट अलग हुन चाहने केटालाई मद्दत गर्न सक्छ - भगवानले निषेध गर्नुहोस्।
र कुनै पनि अवस्थामा, जब जवान मानिसलाई अनुमति दिइन्छ र आफ्नो आमाबाबुको इच्छा विरुद्ध आफ्नो हृदयको छनोटमा विवाह गर्न आदेश दिइन्छ, उसले उनीहरूसँग राम्रो र सान्त्वनादायी कुराहरू बोल्न बाध्य छ, सबै नम्रता र सम्मानका साथ। तिनीहरूलाई भन्नुहोस्: 'प्रिय अभिभावकहरू, तपाईंले मेरो लागि गर्नुभएको सबै कुरालाई म माया गर्छु र कदर गर्छु, र म पक्का छु कि तपाईंले यस धर्मी केटी र वीर महिलाबाट पवित्र भक्ति पाउनुहुनेछ'। र सामान्यतया यदि तिनीहरूले तुरुन्तै मेलमिलाप गर्दैनन् भने - तिनीहरू नातिनीको जन्म हुँदा मेलमिलाप हुनेछन्।
'घृणित' भनेर सृजना गरिएको क्रेटन निषेधबाट तिनीहरूले के आनन्द पाउनेछन्?
मैले मेरो टिप्पणीको तीव्रताको लागि साइटमा माफी लेखेको छु, र म यसलाई यहाँ पनि दोहोर्याउँछु (यो किन दुई च्यानलहरूमा सञ्चालन गरिएको छ मैले बुझिन। मैले यहाँ धेरै गोप्यता आवश्यक पर्ने चीजहरू देखेको छैन। मैले महसुस गरें कि केहि बहसलाई गल्तीले यहाँ इमेलमा मोडियो)।
वास्तवमा, कुन कुराले मलाई चिन्तित तुल्यायो मुख्यतया सन्दर्भ थियो, तर म पनि सामग्रीसँग कडा असहमत थिएँ। र तिम्रा जातका जातिहरू अतिक्रमण हुनेछन्।
महरिक र अरूको भूभागको सम्मान गर्ने अवधारणाको लागि, यहाँ लेखहरूमा मेरा टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्:
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA/בכל तरिका, यो स्पष्ट छ कि आमाबाबु प्रति बोली को रूप आदर हुनुपर्छ।
सबैलाई शुभकामना र पुन: माफ गर्नुहोस्
एलुलमा एसडी १० मा, पी
रब्बी अव्राहमसँगको मेरो भर्खरका छलफलहरू जुन हामी बीचको निजी इमेलमा भएको थियो, र आज राती साइटमा अपलोड गरिएको थियो - माइक्राले साइटमा प्रकाशित गर्ने उद्देश्य राखेका थिएनन्, र यसलाई 'मस्यौदा' मान्नुपर्दछ, जुन आवश्यक छैन। एक सुसंगत निष्कर्ष प्रतिबिम्बित।
गलत बुझाइको लागि माफी चाहन्छु। मैले लेखेको रूपमा, मैले सोचें कि गल्तीले चीजहरू साइटको सट्टा नियमित इमेलमा गयो, र मैले तिनीहरूमा साइटमा यहाँ भएको प्रवचनबाट विचलित भएको केही देखेको छैन, त्यसैले मैले तिनीहरूलाई फर्वार्ड गरें (वास्तविक समयमा। ) साइटमा अपलोड गर्न। अहिले मात्रै बहस सकिएकोले मात्रै उनीहरु आएका हुन् । र वास्तवमा हामी बीचको अन्तिम पोस्टहरू जब मैले महसुस गरें कि तिनीहरू यहाँका लागि होइनन् मैले अपलोड गरेन। जे होस्, फेरि माफ गर्नुहोस्।
ऋषि रब्बी MDA लाई, जो बुद्धि र विज्ञानले भरिएको छ, एक विश्वासयोग्य अर्थशास्त्री र साहसी, डेल्बिश माडा, टोरा अध्ययन गर्न र यसलाई सिकाउन, र हरेक उपायमा मुकुट, सही र सम्मानजनक - उनको शान्ति हाडामा पुनर्स्थापित हुनेछ, र टोरा र प्रमाणपत्र बढ्नेछ, समुदायको आँखा उज्यालो बनाउन! - शान्ति र महान मुक्ति,
म यस बारे थप माग गर्नेछु, किन सहर यस समस्याको बारेमा सही छ कि व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक उपचारहरूमा गम्भीर आर्थिक परिव्यय समावेश छ, जसले कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई आवश्यक पर्नेहरूलाई रोक्छ, र उनीहरूलाई उनीहरूसँग दृढ रहन गाह्रो बनाउँछ।
कोचाभ हशहर र वरपरका क्षेत्रमा, उनीहरूले 'चैम शेल तोवा' (रब्बी नातन शालेभ, मेभुट जेरिकोका रब्बीद्वारा प्रबन्धित) नामक फाउन्डेसन स्थापना गरेर समाधान फेला पारे, जसले परिवार र दम्पतीहरूलाई आवश्यक परेकाहरूको लागि मनोचिकित्सा उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्छ।
प्रत्येक छिमेक र इलाकामा यो कार्यको पाठ्यक्रम अपनाउन, र व्यक्ति र परिवारको लागि व्यावसायिक मानसिक स्वास्थ्य हेरचाहमा प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने समान कोषहरू स्थापना गर्न सार्थक छ।
त्यो जवान मानिसले हजारौं यहूदामा बोल्यो, उसको सम्मानजनक हातको बदलामा,
Damchavi Kida, सादर र धन्यवाद, S.C. लेभिङ्गर
शेलेभ र येशा रब श्री चेन चेनलाई उहाँको इच्छा र टिप्पणीहरूको लागि।
र उसमा र ममा हामी आँधीबेहरीमा झार समात्नेछौं, कप्तानको लट्ठी झुल्न बनाइएको छ। यदि एक रोमन मानिसले तपाईंलाई तरवार र अया भन्छ भने, जान्नुहोस् कि यरूशलेम ढिलोमा बनेको छ।
हामी बत्तीको उज्यालोमा लियोरलाई जित्नेछौं, र हामी सबै क्रूर आदेशहरूबाट बच्नेछौं। एक जना मानिसले आफ्नो भाइलाई ठूलो स्वरले भन्नेछ, छोराछोरीहरू संघर्षरत मन्त्री भएका छन्। र म एक पीडित बासिन्दालाई एउटा आवेदनमा हस्ताक्षर गर्नेछु, जसलाई हामी यस वर्ष राम्रोको लागि हस्ताक्षर गर्नेछौं।
30 तिश्री 10 - 2016/12/35 XNUMX:XNUMX बजे
यस विषयमा छलफल वसन्तमा लेखहरूमा फेला पर्नेछ:
रोनी शुर, 'परिवर्तन गर्न सम्भव छ ('आत्माको सल्लाह' मा विपरित प्रवृत्तिको उपचारमा), Tzohar XNUMX (XNUMX), 'Asif' वेबसाइटमा;
रब्बी Azriel एरियल, 'के कसैले परिवर्तन गर्न सक्छ? (प्रतिक्रिया) ', त्यहाँ, त्यहाँ;
डा. बारुच कहाना, 'धर्म, समाज र उल्टो प्रवृत्ति', Tzohar XNUMX (XNUMX), 'आसिफ' वेबसाइटमा।
डा. ज्वी मोजेस, 'रुट' वेबसाइटमा, 'रिभर्सल टेन्डेन्सीहरूको उपचार मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावकारी छ'।
उपचारका प्रकारहरू र बाध्यकारी र नकारात्मक स्थितिहरूको विस्तृत सारांश - विकिपिडियामा, प्रविष्टि 'रूपान्तरण थेरापी'।
मैले अब इजरायलको मनोविश्लेषक समाजको "रब्बीका शब्दहरू" को प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छु:
मनोविश्लेषकहरू जसले मानव मनोचिकित्साको गहिरो बुझाइमा आफूलाई समर्पित गर्छन् र मनोचिकित्सा मार्फत उनीहरूको पीडामा मद्दत गर्छन्, हामी LGBT समुदायको बारेमा हालै रब्बीहरूले गरेका अपमानजनक बयानहरूको विरोध गर्नु हाम्रो कर्तव्य ठान्छौं। समलैंगिकता एक मानसिक विकार हो भन्ने दाबी, "विचलन", "अशक्तता जसलाई मनोवैज्ञानिक उपचार चाहिन्छ", मानव मर्यादा र स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लङ्घन हो - र स्वीकृत आधुनिक स्थिति र यौन झुकाव र पहिचानको बारेमा समकालीन व्यावसायिक ज्ञानको विरोध गर्दछ। यसका लागि प्रशिक्षित नभएका रब्बीहरू र शिक्षकहरूले 'मानसिक निदान' दिनु मौलिक रूपमा गलत हो र हामी वास्तवमा त्यस्ता विचारहरूको अभिव्यक्तिलाई आत्मा र युवा र उनीहरूको परिवारको जीवनको लागि वास्तविक खतराको रूपमा देख्छौं।
Yossi Triast (अध्यक्ष) - इजरायल मा मनोविश्लेषण समाज को तर्फबाट
र म अचम्म मान्छु कि मानिस एक मूर्ख वा झूटा हो। उसले जे लेख्यो त्यो नितान्त बेकार हो । समलैंगिकता एक विकृति हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा उहाँको एक वा अर्को स्थिति हुन सक्छ, तर यो उहाँसँग हुन सक्ने व्यावसायिक ज्ञानसँग थोरै सरोकार छ। त्यसैले उनी बेवकूफ जस्तो देखिन्छन्। जबकि यो एक मूल्य एजेन्डा प्रवर्द्धन गर्न आफ्नो व्यावसायिक टोपी को एक जानाजानी शोषण हुन सक्छ, त्यो एक झूटा हो। मैले पाठकलाई विकल्पहरू बीच छनौट गर्न छोड्छु।
20 Tammuz 07 - 2020/14/43 XNUMX:XNUMX बजे
मलाई लाग्दैन कि ऊ एक मूर्ख हो। त्यहाँ चेतनाको डरलाग्दो अभाव छ, र यो बुद्धिमान मानिसहरूमा पनि देखिन्छ। यदि तपाईंसँग कुनै कुराको साथ दिमाग धुने पर्याप्त समय छ भने, तपाईंले सोच्न थाल्नुहुन्छ कि यो सत्य र अपरिहार्य छ। दुर्भाग्यवश यो एकदम थोरै हुन्छ।
20 Tammuz 07 - 2020/15/00 XNUMX:XNUMX बजे
मैले त्यहाँ पिङब्याकको जवाफ दिएँ
Fingback: विशेषज्ञलाई चिन्नुहोस् नियम र विवरण मा
डोरोन मा Lehavah एक जातिवादी संगठन हो? (स्तम्भ ४८४)
mikyab मा ऋषिहरु द्वारा प्रवचन को जवाफ - बियर Hagola
mikyab मा Lehavah एक जातिवादी संगठन हो? (स्तम्भ ४८४)